ခံနိုငျအောငျခံမယျ - Owl Myanmar News
“မောငြးတော့..” “ဦးလေးဘယျကိုဝငျဦးမလဲ.နှယျနီ” “အငျး..မရှိတော့ပါဘူး..အိမျကိုပဲပွနျတာပေါ့” နှယျနီလှိုငျစဉျးစဉျးစားစားနှငျ့ တှေးတှေးဆဆလေးပွောသညျ။ ပွီးတော့ ခကျြခငျြးပငျကိုကြျောစိနျရှိရာဖကျသို့လှညျ့လိုကျပွနျသညျ။
“အျော.မလေို့.ဟို.ဒယျဒီမှာခဲ့တဲ့ကိစ်စလုပျရဦးမယျ.ဦးလေး.၊ပနျးရံသမားတှေ ဆငျးခိုငျးဖို့လေ ” “အငျး… ခုပဲအဲဒီဖကျကိုတဈခါတညျးလှညျ့ဝငျလိုကျမယျ အဈကိုကွီးက ဒီတဈခေါကျကွာမယျနဲ့တူတယျ..” “ဟုတျတယျ.ဦးလေး.ဒကျဒီနဲ့မာမီက မာမီ့တူမ မင်ျဂလာဆောငျပွီးမှ မန်တလေးကပွနျမှာဆိုတော့ တဈလနီးပါးလောကျ ကွာလိမျ့မယျနဲ့ တူတယျ”
“နှယျနီ့ အနျတီလေးက အိမျမှာလာနပေေးမှာပေါ့..” “ဟုတျတယျ ဦးလေး သူလာပွီး မနလေဲ နှယျနီ့သူငယျခငျြးတှရှေိတယျ အိမျမှာချေါထားလိုကျရုံပဲ အနျတီလေးက ဒကျဒီ့ညီမဆိုပမေယျ့ ဖအတေူမအကှေဲညီမလေ… ဆိုးလို့ အိမျက ပဈထားတာ ပွနျချေါတာတောငျ တဈနှဈမပွညျ့သေးဘူး.. အရငျတဈခေါကျ အဈကိုကွီးတို့သှားတုနျး မာလာခိုငျဒီမှာလာနတေော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ.. ဒီမှာကတော့ ခဏပဲလာနတောလေ… ပွီးတော့ ဒကျဒီ့အိမျလဲဖွဈ နှယျနီကလဲ ရှိတော့သူငွိမျနတောပေါ့…” “ဒါပမေယျ့ အနျတီလေးက နှယျနီ့အပျေါတော့ ကောငျးပါတယျ အရငျတဈခါကလို ညနကေရြငျ မာလာခိုငျကို ဦးလေး သှားချေါပေးရဦးမလား…”
“အနျတီလေးက ဖုနျးဆကျထားတယျ… ညနကေရြငျ သူ့ဖာသာပဲ လာခဲ့မယျတဲ့… ဦးလေးသှားချေါဖို့ မလိုတော့ဘူး..” “အငျးအငျး” ကိုကြျောစိနျနှငျ့နှယျနီလှိုငျတို့နှဈယောကျသား စကားစပွတျသှားကွသညျ။ စကားပွောရငျး မာလာခိုငျ၏ အကွောငျးပါလာတော့ ကိုကြျောစိနျတဈယောကျ ရငျထဲနှေးသှားမိသညျ။ အသကျ(၃၀)လောကျပငျရှိသေးသော မာလာခိုငျ၏အလှက အသကျ(၄၀)ကြျောလူပြိုကွီး ကိုကြျောစိနျ၏ရငျကို စှဲငွိစခေဲ့တာတော့ အမှနျပငျ ဖွဈသညျ။ ဒါပမေယျ့ မာလာခိုငျက သူ့အလုပျရှငျအဈကိုကွီးဦးထှနျးခိုငျ၏ ညီမဖွဈတာကတဈကွောငျး၊ နောကျပွီး မာလာခိုငျကခသေူမဟုတျ ဒီအသကျအရှယျနှငျ့ ယောကျြားနှဈယောကျရခဲ့ဖူးပွီးပွီ။ မာလာခိုငျ၏ ပထမ ယောကျြားက သူမတို့အိမျမှ ဒရိုငျဘာဖွဈပွီး ဒုတိယယောကျြားက ထိုဒရိုငျဘာ၏ ညီအရငျးဖွဈလသေညျ။ ဒါတှကွေောငျ့လညျး သူမကို မိသားစုတဈခုလုံးက ဖယျကငျြထားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။ ဒီလိုအကွောငျးမြားကွောငျ့ မာလာခိုငျအား ကိုကြျောစိနျ လကရြှောငခြဲ့ခှငြး ဖွဈသညျ။ နို့မို့ဆိုရငျတော့ ကြျောစိနျဆိုတာကလညျး ခသေူမှ မဟုတျတာ။
လူပြိုကွီးတှေ လူပြိုကွီး ဖွဈရခွငျးအကွောငျးက နှဈရပျရှိသညျ။ နုံလှနျးလငျြလညျး လူပြိုကွီး ဖွဈတတျသညျ။ လညျလှနျးလငျြလညျး လူပြိုကွီဖွဈတတျသညျ။ကိုကြျောစိနျက ဒုတိယအမြိုးအစားထဲက လညျလှနျး၍ လူပြိုကွီးဖွဈရသူတဈယောကျပငျ။ မောငျးလာသော ကားလေး လမျးမကွီးပျေါတှငျ တရိပျရိပျပွေးလှားမောငျးနှငျ၍ လာရငျး တဈနရောအရောကျ ဆောကျလကျစ တိုကျကွီးတဈလုံး၏ ရှတှေ့ငြ ထိုးရပျလိုကျသညျ။ ပွီး ကားဟှနျးသံ နှဈခါလောကျပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခိုကျ ဆောကျလကျစ တိုကျကွီးဆီမှ လူတဈယောကျ သူတို့ကားလေးရှိရာသို့ ဦးတညျ၍ပွေးထှကျလာသညျ။ အသားညိုညို ထောငျထောငျမောငျးမောငျး ကိုယျလုံးကတုတျတုတျခိုငျခိုငျဖွငျ့ အသကျ၃၀ကြျောလောကျရှိပွီဟု ခနျ့မှနျးရသညျ့ ထိုသူက သူတို့၏ရပျထားသော ကာလေးဘေးသို့ အရောကျရပျလိုကျသညျ။ကားတံခါး မှနျအား ကိုကြျောစိနျက ခလြိုကျသညျ။ ထိုနညျးတူ နှယျနီလှိုငျကလညျး သူမဖကျရှိကားတံခါးမှနျကို ခလြိုကျပွီး လကျထဲမှ ပီကဗေူး အခှံလေးကို အပွငျသို့ လှငျ့ပဈလိုကျသညျ။
“ကိုခငျအေး.. ခငျဗြားတို့ အလုပျ လာဆငျးလို့ရပွီ. ပစ်စညျးတှေ အစုံရောကျနပွေီ၊ ဘိလပျမွကေမနကျရောကျမယျ၊ အဈကိုကွီးက ကားဂိုဒေါငျကို တဈလအတှငျး အပွီးလုပျပေးဖို့ မှာသှားတယျ… ဒီမှာကလညျး အလုပျကမပွတျသေးဘူး.. အဈကိုကွီးကတော့ မနကျဖွနျ စပွီးလုပျဖို့ မှာသှားတာပဲ.. ဘယျ့နှယျ့လဲ ဆငျးနိုငျပါ့မလား” “မနကျဖွနျတော့ ဆငျးနိုငျဦးမှာ မဟုတျသေးဘူးနဲ့တူတယျ” “မဖွဈဘူး အဈကိုကွီးက ခငျဗြားတို့ မလုပျနိုငျရငျ တခွားလူကို ချေါခိုငျးဖို့ မှာထားတယျ..” “ထွီ ..” တိုးလညျး မတိုး ကယျြလညျးမကယျြ၊ သာမနမြှသွော အသံဖွငျ့ နှယျနီ တံတှေးတဈခကျြထှေးလိုကျသညျ။ ပွီးသူမစိတျထဲမှလညျး ဟငျးသူကမြား ဟူသော အတှေးဖွငျ့ မကျြနှာလေး မာတငျးခကျထနျသှားရသညျ။
“ကောငျးပွီလေ.မနကျဖွနျတော့ မလုပျနဲ့သနျဘကျခါလာပွီး ဆငျးပေးပါ့မယျ…” “လာဖွဈအောငျတော့ လာခဲ့ ကိုခငျအေး ကဲ..ဒါဆို ကြုပျတို့လဲ သှားမယျ” “အငျး..” စကားလညျးဆုံးရော မောငျးထှကျသှားသညျ့ ကားလေးကို ကွညျ့ရငျး ပနျးရံဆရာ ကိုခငျအေးပွုံးလိုကျမိသညျ။ ကားပျေါမှကောငျမလေး အတျောလှ၍ သူစကားပွောရငျးငေးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ဒါကို ကောငျမလေးက မတူမတနျသလိုပုံနဲ့ ထှီခနဲ တံတှေးတဈခကျြ ထှေးလိုကျတာကို တှလေို့ကျရသညျ။ ဒီလိုပါပဲ ဒါမြိုးလေးတှကေ ဟငျးမတှသေ့ေးလို့ပါ၊ နဖူးတှဒေူ့းတှေ့ ထိပျတိုကျတှပွေီ့ ဆိုတော့ ဒီကဖွငျ့ဘာမှ မဖွဈသေး၊ သူတို့က တဖနျြးဖနျြး ပွီးနတေတျတာလေးတှဟေုတှေးရငျး ခငျအေးသညျ ရပျနရောမှ လှညျ့ထှကျခဲ့လတေော့သညျ။
မနကျ မိုးလငျးသညျနှငျ့ ကိုကြျောစိနျက ရောကျနှငျ့နပွေီးနှယျနီနှငျ့ မာလာခိုငျတို့တူဝရီးကိုဈေးသို့ပို့ပေးရသညျ။ ဈေးတှငျ စားသောကျဝယျခွမျးပွီး ဒုတိယနှဈကြောငျးသူ နှယျနီအား ကြူရှငျသို့ ဝငျပို့ခဲ့ပွီး မာလာခိုငျကိုအိမျသို့ပွနျပို့ပေးရသညျ။ ကားပြေါမှ နှယနြီဆငြးသှားသညနြှငြ့ မာလာခိုငတြဈယောကြ ရှခေ့နြးသို့ ပှောငြး၍ ထိုငသြညြ။ မှေးကွိုငျသော ရနံ့လေးမြားက ကိုကြျောစိနျအား တိုကျရိုကျထိတှလေ့ာသညျ။
မာလာခိုငျ၏တောငျ့တငျးတုတျခိုငျသော ပေါငျတနျကွီးမြားက လုံးတဈနပွေီး၊ အကွငျီထဲမှ တိုးထှကတြော့မယောငနြို့အုံကှီးမွားက ကိုကြွောစိနြ၏မကစြွိရှဝေ့ယြ အလှပှနသလေိုဖှဈနသညြေ။ စကားမရှိစကားရှာ၍ပွောရငျး တဈခကျြတဈခကျြ စိုကျစိုကျကွညျ့လိုကျသော မာလာခိုငျ၏ မကျြလုံးရှဲကွီးမြားက ကိုကြျောစိနျတဈယောကျ ဘရိတျကို နငျးလိုကျမိသညျအထိ စိတျတှေ ဂယောကျဂယကျဖွဈစသေညျ။
ကိုကြျောစိနျ သကျပွငျးတှေ အခါခါ ခရြငျး ကားကိုသာ ဂရုစိုကျ၍ မောငျးနှငျလာခဲ့ရသညျ။ အိမျပွနျအရောကျ ကားကို ခွံဝငျးထဲ ကှဝေ့ငျလိုကျတော့ ပနျးရံမြား ရောကျနသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ ကားဝငျလာတာ မွငျရသညျနှငျ့ ခငျအေးက ပျေါတီကို အောကျသို့ ခပျသုတျသုတျ ထလာသညျ။ ကားရပျလိုကျသညျနှငျ့ မာလာခိုငျက ဈေးခွငျးတောငျး ဆှဲ၍ ကားပျေါမှ ဆငျးကာ အိမျသော့ကို ဖှငျ့ဝငျသှားသညျ။
ကားဘေးတှငျ ရပျနသေော ခငျအေး၏ မကျြလုံးမြားက မာလာခိုငျ၏ နောကျသို့ ပါ၍သှားသညျ။ ကားပျေါမှ ဆငျးလာသော ကိုကြျောစိနျကိုပငျ ဂရုမစိုကျနိုငျပေ။ ကိုကြျောစိနျ၏ စိတျထဲ ခပျတငျးတငျး ဖွဈ၍ သှားရသညျ။ ကိုကြျောစိနျဒီနေ့ ကနြျောတို့ စဆငျးမယျ အငျးမွငျကှငျးမှ မာလာခိုငျ ပြောကျကှယျသှားမှ ခငျအေးက ကိုကြျောစိနျဖကျကို လှညျ့၍ ပွောသညျ။
ကိုကြျောစိနျကစိတျမပါသလိုအငျးလိုကျရငျး ခပျလှမျးလှမျးတှငျထိုငျနသေော ပနျးရံမြားကိုကွညျ့လိုကျသညျ။ “ဟငျ.မငျးနဲ့မှသုံးယောကျထဲလား..” “ဒီနတေ့ော့ ကနြျောနဲ့ ဟိုစှပျကယျြဝတျထားတဲ့ ကောငျလေး နှဈယောကျထဲ ဆငျးမှာ..၊ ရှပအြကွငျီ နဲ့ကောငျက ဟိုဖကျဆိုကျထဲ လှတျလိုကျရမှာ..၊ သုံးလေးရကျလောကျ နမှေ ဒီမှာ အကုနျလာဆငျးမယျ..၊ ကနြေျာ့လူအားကတော့ ခငျဗြားသိတဲ့ အတိုငျးပဲ” “အေးလေ. ဒီနစေ့ဆငျးရငျ ပွီးတာပဲ ဘယျလိုလုပျမယျဆိုတာ အဈကိုကွီးက မငျးကို ပွောထားပွီးပွီမဟုတျလား…” ” ပွောထားပွီးပါ ပွီ”
“ကဲ.ဒါဆိုလဲစလုပျတော့…” စကားစကိုဖွတျ၍ ကိုကြျောစိနျ တိုကျထဲ ဝငျလာခဲ့ပွီး ဧညျ့ခနျးထဲမှာထိုငျ၍ ဂြာနယျတဈစောငျကိုယူကာ ဖတျနသေညျ။ ကိုကြျောစိနျ၏ စိတျက ဂြာနယျထဲသို့ ရောကျ၍ မသှား ၊ မာလာခိုငျ ထံသို့သာရောကျနသေညျ။ ဂြာနယျကို ကွာကွာမဖတျနိုငျ။မာလာခိုငျကိုတှမွေ့ငျခငျြစိတျက ပွငျးပွလာ၍သကျပွငျးတဈခကျြကို လေးပငျစှာ ခြ၍ ကိုကြျောစိနျ ထရပျလိုကျသညျ။ “အိုး.ကိုကြျောစိနျကွီးကလဲ အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့၊ ဒီမှာ အဝတျလဲနတော..” ထမီကို ရငျလြားရနျ လကျနှငျ့ စုကိုငျရငျး ပွောလိုကျသော မာလာခိုငျ၏ ဖှေးဖှေးနုနု နို့အုံနှဈလုံးကနို့သီးထိပျလေးမှ လှဲ၍ အတိုငျးသား မွငျနရေသညျ။ မာလာခိုငျက အဝတျလဲတာ အိပျခနျးထဲတှငျ မဟုတျပဲမီးဖိုထဲတှငျ ဖွဈနသေညျကို ကိုကြျောစိနျ မစဉျးစားတတျ။ လကျတဈကမျး အကှာတှငျ မွငျတှနေ့ရေသောမာလာခိုငျ၏ ရငျသားအိအိမြား အလှတှငျသာ စှဲငွိနသေညျ။ ဗွုံးခနဲ ကိုကြျောစိနျကို တှလေို့ကျရ၍ အံအားသငျ့သှားလို့လား မပွောတတျ။
ထမီကို ခုခြိနျထိ ရငျလြားမဝတျသေး။ နှဈယောကျသား မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ရပျ၍ ကွောငျကွညျ့နပွေီးမှ မာလာခိုငျက မကျြလှာခကြာထမီကို ဝတျရနျ ဖွနျ့လိုကျသညျ။ အောကဖြကကြိုလွှောကသွှားသော ထမီ အပျေါနားစက နို့နှဈလုံးလှဈဟပွလိုကျသလို ဖွဈသှားသညျ။ “အို.အာ့.မလုပျနဲ့.မလုပျနဲ့အား.ကို.ကိုကြျောစိနျကွီးနျော အိုအို မလုပျနဲ့နျောမလုပျနဲ့လို့..” အိမျတှငျ သူတို့နှဈယောကျထဲသာ ရှိသညျဟူသော အသိနှငျ့ မာလာခိုငျ၏ အကငျြ့စရိုကျကို သိထားသောကိုကြျောစိနျက မာလာခိုငျ၏ ခါးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့အားယူဆှဲပှရေ့ငျး နို့တဈဖကျကိုငုံ့၍ စုပျလိုကျသညျ။ ရငျဘတျလေးကော့တကျသှားသော မာလာခိုငျက အထဈထဈအငေါ့ငေါ့ဖွငျ့နှုတျမှ တားနသေျောလညျး ကိုကြျောစိနျက အရေးမစိုကျတော့ပါ။
မာလာခိုငျကလညျး အသညျးအသနျရုနျးကနျခွငျး မပွု။ ကနျြနို့တဈဖကျအား ကိုကြျောစိနျကလကျဖွငျ့ညှဈ၍နယျသညျ။တငျးနသေော နို့အုံလုံးလုံးကွီးတှကေ ကိုငျရတာ အရသာတှလှေ့သညျ။ ထမီစကိုကိုငျထားသော သူမလကျနှဈဖကျက တဖွညျးဖွညျးအောကျဖကျသို့ နိမျ့ဆငျးလာသညျ။ “အိုရှငျတျော.တျောပါတော့.တျောပွီ ကမြကို လှတျပါတော့..ရှငျ” မကျြနှာလေး မော့ရငျ ပွောနသေော မာလာခိုငျ၏ မကျြနှာလေးမှာ ပွုံးယောငျသမျးရငျး နီမွနျးနသေညျကိုတော့ ကိုကြျောစိနျမမွငျ။ နို့ကိုသာ သဲကွီးမဲကွီး စို့နသေညျ။ တဈလုံးပွီးတော့နောကျတဈလုံးကို ပွောငျး၍ စို့ပွနျသညျ။ “အို..မလုပျနဲ့..တျောပါတော့ဆို.ဟငျ့ကြှတျ.အအား.” မတျတတျရပျနသေော မာလာခိုငျ၏ ဒူးဆဈလေးမြား တဆတျဆတျ တုနျလာသညျ။ ညှတျ၍ကခြငျြလာသညျ။
လူပြိုကွီးသာ ပွောရတယျ၊ နို့စို့တာက ပညာသားပါလှသညျ။ နို့သီးကိုတအားငုံစုပျရငျး လွှာထိပနြှငြ့ မြား ကျောကျောထိုးလိုကျတာ မာလာခိုငျ ရငျခေါငျးထဲအထိ ကွပျကွပျသှားရသညျ။ မကျြစကေို့ စုံမှိတျထားသော မာလာခိုငျ၏ လကျထဲမှ ထမီစက လှတျကခြငျြလာသညျ။ တဖှေးဖှေးလွှောကသွှားသော ထမီစကွောငျ့ လဈဟာသှားသော သူမ၏ ကြောပွငျ ပွညျ့ပွညျ့လေးကို ခါးတှငျဖကျထားသညျ့ ကိုကြျောစိနျ၏ လကျမြားက ရှလြေ့ား လွှောတိုကြ၍ ပှတျသပျပေးသညျ။ ပွီး ကနျြလကျတဈဖကျကပါ သူမ၏ နောကျကြောသို့ရောကျလာပွီး ကားစှငျ့မို့မောကျနသေော တငျပါးကွီးတှကေိုဖဈြညှဈသညျ။
နှဈယောကျစလုံး တုနျတုနျရီရီဖွဈကာ အသကျရှူသံတှပွေငျးထနျနကွေသညျ။ ပွှတခြနဲ မွညျသံနှငျ့ အတူ ကိုကြျောစိနျက နို့ကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ တပွိုငျနကျထဲမှာပငျသူ၏ လကျမြားကိုလညျး မာလာခိုငျ၏ ကိုယျပျေါမှ ဖယျလိုကျသညျ။ “အဟငျး..” ဆိုတဲ့ သကျပွငျးခသြံလေးကို ပွုလကျြ မာလာခိုငျတဈယောကျ ထမီ စှနျတောငျဆှဲလကျြသားအိပျခနျးထဲ ပွေးဝငျသှားသညျ။ သူမ၏ နောကျကြောမှ လွှောကနွသော ထမီက အိပျခနျးထဲသို့ခပျသှကျသှကျ ပွေးဝငျသှားသော မာလာခိုငျ၏ တသိမျ့သိမျ့ တုနျခါသှားသညျ့ တငျသားအိအိကွီးမြားကိုအတိုငျးသားနီးပါး လှဈဖျော၍ နသေညျ။
သူမ၏ နောကျဖကျမှ ကိုကြျောစိနျ လိုကျလာသညျ။ အိပျခနျးထဲ အရောကျ မာလာခိုငျက ကုတငျပျေါကအိပျယာထကျသို့ သူမ၏ ကိုယျလုံးကို ဝုနျးခနဲ ပငျ လှဲ၍ အခြ အနားသို့ ရောကျလာသော ကိုကြျောစိနျက သူမ၏ကိုယျပျေါကိုငုံ့၍ဖကျရငျး ကုတငျစောငျးသို့ ဒူးထောကျကာတကျလိုကျသညျ။ ထိုအခိုကျမာလာခိုငျ၏ ခါးစောငျးသို့ ဖိထောကျမိလိုကျသော အရာက သေးသေးကှေးကှေး မဟုတျလှဟုသိလိုကျရသော မာလာခိုငျတဈယောကျ ရငျထဲတဒိနျးဒိနျး နအေောငျပငျ ခုနျလို့သှားရလသေညျ။ ကိုကြျောစိနျက အိပျယာထကျတှငျ တစောငျးလှဲနသေော မာလာခိုငျကို ပကျလကျဆှဲ၍ လှနျလိုကျသညျ။
မာလာခိုငျ ဘာစကားမှ မဆိုတော့၊ မကျြလုံးတှကေို စုံမှိတျထားရငျး မကျြလုံးမြား အပျေါ၌ သူမ၏လကျဖြံတဈဖကျကို ကနျ့လနျ့ဖွတျ၍ တငျထားလိုကျသညျ။ တရှူရှူး တရှဲရှဲဖွငျ့ အသကျရှူသံတှေ ပွငျးထနျနသေော ကိုကြျောစိနျက သူမ၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဆှဲထောငျ၍ ထမီကို ခါးသို့ လှနျတငျလိုကျသညျ။ မာလာခိုငျ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ရှိသောတဈထညျတညျးသော ထမီလေးမှာ ခါးနှငျ့ ဝမျးဗိုကျပျေါတှငျ ပုံလကျြသား ။
သူမ၏ တဈကိုယျလုံးမှာဖှေးဖှေးနု၍ တငျးရငျး ဝငျးမှတျနသေညျ။ တငထြားသော လကအြောကမြှမကလြွုံးကို ခပမြှေးမှေးလေးဖှငြ့ ကာကှညြ့နသော မာလာခိုငစြအိုလေးကိုပငြ တဈခကရြွှုံ့လိုကမြိသညြ။ ကိုကြွောစိနကြ သူမ၏ပေါငနြှဈခွောငြးကို ကိုငြ၍ဒူးထောကလြကြွရှသေို့ တိုးလိုကသြညြ။ မာလာခိုငျ ခိုးကွညျ့နသေော မကျြလုံးမြားကိုပွနျ၍မှိတျခလြိုကျသညျ။
“ကိုကြျောစိနျ..ကိုကြျောစိနျ..ဗြို့.ကိုကြျောစိနျ” အိမရြှမှေ့ ချေါလိုကျသော ခငျအေး၏ အသံ။ နှဈယောကျစလုံး ဆတျခနဲ တုနျသှားကွသညျ။ “ကိုကြျောစိနျ ကိုကြျောစိနျ..”
ချေါသံက ဧညျ့ခနျးထဲသို့ပငျ ရောကျ၍ လာသညျ။ ကိုကြျောစိနျ ကမနျးကတနျး ကုတငျပျေါမှ ဆငျးကာပုဆိုးကို ပွငျဝတျရငျး အိပျခနျးထဲမှ ထှကျလိုကျသညျ။ ထိုအခိုကျ မာလာခိုငျ၏ ထံမှတောကျခေါကျလိုကျသံကိုတော့ ရှသေို့ အာရုံရောကျနသေော ကိုကြျောစိနျ မကွားလိုကျရပေ။ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ရပျနသေော ခငျအေးနှငျ့ ကိုကြျောစိနျ မကျြနှာခငျြး ဆိုငျမိသညျ။
“ဘာလဲ..ကိုခငျအေး ဒီမှာအိမျသာတကျနတော..” “ဟဲ.ဟဲ.” ကိုကြျောစိနျကိုကွညျ့၍ခငျအေးရယျလိုကျသညျ။ ပွီးမှ “ဘိလပျမွမေရောကျသေးဘူး အဲဒါ ပေးပါဦး..”
ဟငျခကျပွီ။ ဘိလပျမွဆေိုငျ၏ ဖုနျးနံပါတျအား ကိုကြျောစိနျ မသိ၊ နှယျနီလှိုငျသာ သိသညျ။ ဆိုငျသို့ ကားဖွငျ့အရောကျသှား၍ ပွောရုံသာ ရှိသညျ။ ပုဆိုးထဲမှ လီးကလညျး တောငျနတောမှ တဆတျဆတျ ခါနသေညျ။ ဘိလပျမွမေရောကျ၍ ပနျးရံသမားမြား ပွနျသှားရတာကို အဈကိုကွီး ပွနျလာ၍ သိသှားလငျြကိုကြျောစိနျဆကျ၍မတှေးတော့။ လကျပတျနာရီကို မှောကြ၍ ကွညျ့သညျ။ မနကျ ၈ နာရီခှဲပွီ။ကိုကြျောစိနျခေါငျးနပနျး ကွီးသှားသညျ။ ၉ နာရီခှဲကို နှယျနီလှိုငျအား သှား၍ ချေါရအုံးမညျ။ သူ မာလာခိုငျနှငျ့တှဖေို့ မလှယျတော့။ ဘိလပျမွဆေိုငျရောကျပွီးသညျနှငျ့ ခုခကျြခငျြးပို့ရနျပွော၍ နှယျနီလှိုငျကိုတဈခါတညျး တနျး၍သှားချေါရနျသာ ရှိတော့သညျ။
“ဟငျးခုပဲ ကြုပျသှားလိုကျမယျ…ဟဲဟဲ” တဟဲဟဲ ရယျ၍ ရယျကွဲကွဲ လုပျနသေော ခငျအေးကို နားမလညျနိုငျစှာဖွငျ့ တခကျြ ခေါငျးငဲ့၍ ကွညျ့ပွီးနှဈယောကျသား အတူတူပငျ အိမျထဲမှ ထှကျလာခဲ့သညျ။ မာလာခိုငျတဈယောကျ သညျးမခံနိုငျလောကျအောငျ စိတျညဈသှားမိရသညျ။ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျသှားသောကိုကြျောစိနျ၏ ကြောပွငျကို လှမျးကွညျ့ရငျး တောကျတဈခကျြ ခေါကျလိုကျမိသညျ။ သူမ စိတျထဲမှာ အလိုးခံခငျြသညျ့စိတျဆန်ဒတှကေ ထိနျးမရအောငျဖွဈပျေါလို့နသေညျ။
အတျောပငျခံစားရခကျနသေညျ။ မာကြောသော အရာဝတ်ထု တဈခုခုကို စောကျခေါငျးထဲသို့ ခပျကွမျးကွမျးထိုးထညျ့ခငျြနသေညျ။ အိပျယာထကျတှငျ လူးလှိမျ့ရငျး ခါးတှငျ ပတျ၍ ပုံနသေော ထမီကို စိတျမရှညျစှာဖွငျ့ ဆှဲခြှတျပဈလိုကျသညျ။ မာလာခိုငျ၏ လကျတဈဖကျက ပေါငျနှဈလုံးကွားသို့ ရောကျသှားပွီး စောကျဖုတျကို စမျးလိုကျသညျ။ အမှေးထူထူဖွငျ့ စောကျဖုတျကွီးက နဲနဲနောနောမဟုတျ။ အဆမတနျ ခုံးထနသေညျ။ ရှဲနဈအောငျ ထှကျနသေော စောကျရညျမြားကိုလညျး စိုခနဲ စမျးမိလိုကျသညျ။
လကျမထိပျလေးနှငျ့စောကျစကေ့လေးကို ပှတျရငျး လကျညှိုးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ ထိုးထညျ့ရနျ ပွငျလိုကျသညျ။ ဒီလို လုပျလို့မဖွဈ။ အပြိုဖွဈကထဲက သူမ၏ စိတျဆန်ဒကို ဘယျသောအခါမှ လကျဖွငျ့ မဖွဖြေောကျခဲ့။ မာလာခိုငျစောကျဖုတျပျေါမှ လကျကိုဖယျလိုကျပွီး သကျပွငျးခလြိုကျမိသညျ။ ထိုအခိုကျ ပူနှေးမာကြောသော အရာတဈခုက သူမ၏ပေါငျရငျးဘေးဖကျသို့ လာ၍ ထိတှသေ့ညျ။ ဖွတျခနဲ ဖွဈသှားရငျးမာလာခိုငျ မကျြလုံး ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။
“ဟငျရှငျ.ရှငျ” မာလာခိုငျ အံ့သွထိတျလနျ့စှာဖွငျ့ ထထိုငျမိမတတျ ဖွဈသှားသညျ။ သူတှလေို့ကျရသညျကကိုယျလုံးတီးဖွငျ့ ပနျးရံဆရာ ခငျအေးပငျ ဖွဈသညျ။ အလုပျကွမျး သမားပီပီ သနျမာကဈြလဈြ ဖုထဈသော ခငျအေး၏ အဝတျမဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို တှလေို့ကျသော မာလာခိုငျအား တဒင်ျဂ ငွိမျသကျသှားစသေညျ။ “မငျးလေး..သိပျပွီး အလိုးခံခငျြနတေယျ မဟုတျလား မငျး မကွုံဖူးသေးတဲ့ အရသာမြိုး ခံစားရအောငျ ကိုယျလုပျပေးပါ့မယျ”
စိုကျကွညျ့နသေောမာလာခိုငျတဈယောကျ ခါးလေးကော့တကျမတတျ စအိုဝကိုရှုံ့ရှုံ့သှငျးမိနရေငျး စောကျရညျကွညျတှေ ထပျ၍ စိမျ့ထှကျလာသညျ။ ခငျအေး ငုံ့၍ မာလာခိုငျ၏ ကိုယျလုံးကို ပှေ့၍မယူလိုကျသညျ။ ခငျအေး လကျထဲ စှခေ့နဲ ပါသှားသော မာလာခိုငျက ခငျအေး ကိုကွညျနူးစှာဖွငျ့ရှကျကိုးရှကျကနျးလေး ကွညျ့လိုကျသညျ။ မိနျးမမြားသညျ သူတို့၏ ကိုယျခန်ဓာအား ယောကျြားကနိုငျနိုငျနငျးနငျး ခြီမပှယေူ့တာကို ကွညျနူးလိုလားစှာ ခံခငျြကွသညျခညျြး ဖွဈသညျ။
ခငျအေးက မာလာခိုငျအားကုတငျပျေါကနျ့လနျ့ဖွတျ၍ တငျလိုကျသညျ။ ကုတငျစောငျးလိုးနညျးဖွငျ့ လိုးတော့မညျကို သိလိုကျသော မာလာခိုငျကသူမ၏ တငျသားကားကားကွီးကို ကုတငျစောငျးတှငျ အသားကအြောငျ ပွုပွငျနရောယူရငျး ပေါငျနှဈခြောငျးကို ကားလိုကျသညျ။ သူမ၏ တဈကိုယျလုံးကို မကျမောစှာ ကွညျ့ရငျး ခငျအေး ရှသေို့ တိုးလာကာ စိုရှဲနသေော စောကျပတျဝသို့ညီလေးကို မွုပျအောငျ ထိုး၍ အသှငျး မာလာခိုငျကတှဲလောငျးခထြားသော ခွနှေဈခြောငျးကို မယူ၍ကုတငျစောငျးတှငျ ဖနောငျ့နှငျ့ နငျး ပေါငျကိုကားကာ သူမ၏ တငျပါးကွီးကို အစှမျးကုနျ ကော့၍ ကော့၍အောကျမှ ပငျ့ကာ ကော့ထိုးပဈလိုကျသညျ။
“ပွှတျ.ဗွဈ..ဖွဈ..ပွှတျ.ဖှတျအားဟငျး..” ခံခငျြလှနျးနသေော မာလာခိုငျက အောကျမှ ကော့၍ ပငျ့တငျကာ ခွောကျခါ ခုနဈခါလောကျလိုးလိုကျပွီးတော့မှ တဒင်ျဂ စိတျကနြေပျသှားပုံဖွငျ့ ခငျအေးကို မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ ပွီးတော့ တဈခကျြပွုံးပွလိုကျပွီး သူမ၏ ခွထေောကျနှဈခြောငျးကို ကုတငျဘေးတှငျ မတျတတျရပျနသေော ခငျအေး၏ခါးကို လှမျးခြိတျကာ ဆှဲယူလိုကျသညျ။ မာလာခိုငျက အောကျမှ ပငျ့၍ လိုးအပွီး တငျပါးကွီးကို မှယေ့ာပျေါပွနျ၍ အခြ တဝကျသာသာ ကြှတျ၍ထှကျနသေော ညီလေးကို ခငျအေးက မာလာခိုငျ သူ့ကို ခွထေောကျဖွငျ့ ခြိတျ၍အဆှဲ ညီလေးကိုပါ တပါတညျးလိုကျလိုးသှငျးသညျ။
“အ.အ..အအား.ဟငျး ဟငျး..” မာလာခိုငျ ရငျဘတျလေး ကော့ ခေါငျးလေးမော့၍ တကျသှားသညျ။ စောစောက ရမ်မကျဇောကွောငျ့သာ အာသာငမျးငမျး ဖွငျ့ ပငျ့လိုးခဲ့ပမေယျ့ အထိုကျအလြောကျ ကနြေပျသှားရသျောလညျး ခုလို ထိထိမိမိ မရှိလှ။ အပြိုလညျး မဟုတျ ၊ ယောကျြားတျောတျောမြားမြားနှငျ့ ကွုံခဲ့ဖူးသူ ဖွဈလငျ့ကစား မာလာခိုငျမှာအပြိုစငျလေးပမာ တဈကိုယျလုံး အသားတှေ ဇိုးဇိုးဇတျဇတျ တုနျနပွေီးလကျနှဈလုံးလောကျအလို ခငျအေးက အားဖွငျ့ ဆောငျ့၍တဆုံးသှငျးခလြိုကျသညျ။
“ဗွဈဖှတျ..အအမလေး.အ..ဟငျးဟငျး.လုပျလုပျ… ဆကျဆောငျ့.. အမလေး..လေး…” ထောငျတကျနသေောစောကျစကေ့လေးကို အားဖွငျဆောငျ့ကာ စောကျပတျအတှငျးနားသို့ ဖိသိပျလိုကျသညျ။ ကော့ခနဲဖွဈသှားရပွီး တဈကိုယျလုံးလှုပျလှုပျရှရှဖွဈကာ လကျကလေးနှဈဖကျက ခငျအေး၏ လကျမောငျးတှကေို မမှီမကမြး လှမျး၍ ဆှဲဆုတျလိုကျမိသညျ။ ဒီလို နုနယျခြောမော လှပလှနျးသော မိနျးမမြိုးကို မလိုးဖူးသေးသော ခငျအေးကလညျး မညှာတော့ပါ။ မာလာခိုငျ၏ ဖှေးနုသော နို့နှဈလုံးကို သူ့လကျကွမျးကွီးနှငျ့ ဆှဲကိုငျဖဈြညှဈ၍စိတျရှိတိုငျး ဆောငျ့လိုးပါတော့သညျ။
“ပွှတျ.ပလှတျ..ဘှတျ.အားအမလေး.. အဈကိုရဲ့ အမလေးလေး.. ဟငျးဟငျးကောငျးလှခညျြလား.နျောအငျး.. အငျး…” တအားဆောငျ့နသေညျ့ကွားမှ အားမရနိုငျဖွဈလာရသော မာလာခိုငျက သူမ၏ ခွထေောကျနှဈဖကျကိုခငျအေး၏ ခါးမှ ဖယျ၍ မိုးပျေါသို့ထောငျလိုကျသညျ။
အမာလာခိုငျ၏ ထောငျထားသော ခွနှေဈဖကျက ရမျးခါ၍ နသေညျ။ မာလာခိုငျ မကျြလုံး မပှငျ့တော့။ ခငျအေး၏ ဆောငျ့ခကျြတှကေ လွှော့မသှားသညြ့အပွငျ ပို၍ပွငျးထနျသှကျလကျလာသညျ။မကွာလှသောအခြိနျတှငျတော့
“ပွှတျ..ပလှတျ..ပွှတျ..ဖှတျဖတျ..အားအ.အမလေး.. အိုအို… အမလေး… လး.အား..ပွီး.ပွီးအိုး.. ကောငျး.. ကောငျး အငျ့အငျ့.. ” မာလာခိုငျ၏ တငျသားကွီး ကုတငျစောငျးမှ လှတျထှကျသှားသညျအထိ ကော့၍ ကော့၍ တကျလာပွီးအရတှေေ ပနျးထုတျပဈလိုကျတော့သညျ။ ခငျအေးလညျး မကွာခငျ ကိုကြျောစိနျ ပွနျလာတော့မညျ ဆိုတဲ့အသိနဲ့ နောကျရကျတှလေညျး ရှိသေးတာပဲ ဟု တှေးကာ စိတကြိုလွှော့ကာ သုတျရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျရငျး ရှသေို့ငုံ့၍ မာလာခိုငျကို ကွုံးပွီး ဖကျထားလိုကျပါတော့သညျ။
“အနျတီလေး..နကေောငျးရဲ့လား” ငှစေက်ကူ တဈထပျကို ကိုငျ၍ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျလာသော နှယျနီက မီးဖိုခနျးဝငျပေါကျနားတှငျ ရပျလကျြခန်ဓာကိုယျ လေးပငျစှာဖွငျ့ မလှုပျခငျြလှုပျခငျြ လှုပျရှားခကျြပွုတျနသေော မာလာခိုငျကိုမေးလိုကျသညျ။ “ကောငျးပါတယျ.နှယျနီရဲ့ ညကအိပျရေးပကျြလို့ နုံးနလေိုပါ” ဖွမေိဖွရော ဖွလေိုကျသညျ။ အငျးရပျနရောမှ နှယျနီလှညျ့ထှကျမညျအလုပျ မာလာခိုငျ၏ အသံက ထပျ၍ ထှကျပျေါလာပွနျသညျ။ အျော ဒါနဲ့နှယျနီ.. ညကရြငျ တို့မိနျးမသားနှဈယောကျထဲ အဲဒါ ဦးကြျောစိနျကွီးကို လာအိပျခိုငျးရငျကောငျးမလားလို့”
“ကောငျးသားပဲ အနျတီလေးရဲ့ နှယျနီပွောလိုကျပါ့မယျ…”လှညျ့ထှကျလာသော နှယျနီ ဧညျ့ခနျးထဲ အရောကျ ဂြာနယျဖတျနသေော ဦးကြျောစိနျကိုတှလေို့ကျရသညျ။“ဦးလေး..ဟေ…ဒီမှာပနျးရံဆရာကိုကွိုပေးထားဖို့ ငှသေုံးသောငျး” “အျောအေးအေး..သမီး” ငှကေိုလှမျးယူရငျး ကိုကြျောစိနျ၏မကျြလုံးအစုံက အိမျနရေငျး စကပျတိုလေးဖွငျ့ လှခငျြတိုငျး လှနသေောနှယျနီ့ တဈကိုယျလုံးကို ခပျရဲရဲ ကွညျ့လိုကျသညျ။ မနကျက မာလာခိုငျနှငျ့ အစပြိုးခဲ့သော ကိစ်စကကိုကြျောစိနျအား အတျော ဒုက်ခ ပေးနသေညျ။ လီးက ကတြယျကို မရှိ။
“နောကျပွီးအနျတီလေးက ပွောတယျ… ဦးလေးကို ညကရြငျ အိမျမှာ လာအိပျပေးပါတဲ့” “အငျး.အိပျပေးမယျ” ကိုကြျောစိနျစိတျထဲ ပြျောသှားသညျ။ “ဒါနဲ့နှယျနီ မာလာခိုငျကို ဦးလေးလိုကျပို့ပေးရမှာလား” “ခါတိုငျးတော့… သူအိမျပွနျရငျ သူ့ဖာသာ မောငျးသှားတာပဲ ညနေ သူပွနျလာမှ ကားကိုပွနျယူလာမှာပေါ့.. ပွီးတော့ နှယျနီလဲ ဘယျမှ သှားစရာ မရှိတော့ပါဘူး ”
ကိုကြျောစိနျ တဈနကေုနျ အားလပျသှားပွီ။ ပွောပွီးသညျနှငျ့ လှညျ့ထှကျသှားသော နှယျနီ စိတျထဲ ဒီနေ့ ဒီလူကွီး အကွညျ့က ဘာမှနျးလဲမသိဘူးဟုတှေးပွီး နှုတျခမျးလေး စူလိုကျမိသညျ။ ရခြေိုး ထမငျးစားပွီးမာလာခိုငျ ကားကိုယူ၍ သူမအိမျသို့ ပွနျသှားခပြွေီ။ ဦးကြွောစိနကြ အိမရြှတေို့ကပြနြးခှံအောကတြှငရြှိသော ခုံတနြးလွားပြေါ၌ အိပနြသညြေ။ အိပျယာပျေါ လှဲ၍ မဂ်ဂဇငျး ဖတျနသေော နှယျနီ တဈယောကျ သူငယျခငျြးထံ ဖုနျးဆကျရနျး သတိရသဖွငျ့ စာအုပျကိုပိတျ၍ထထိုငျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ အိမျဘေးပနျးခွုံဘေးမှ လှုပျခနဲ တှေ့၍လှမျးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ စောစောက ငါအိပျယာပျေါမှာ လှဲပွီး စာဖတျနတေုနျး ပေါငျကိုထောငျပွီး ခြိတျထားသော့စကပျက ခါးပျေါလနျကပြွီး အောကျပိုငျးမှာဘာမှ မရှိဘူး၊ သူငါ့ကိုလာခြောငျးကွညျ့ပွီး ငါ့ဟာလေးကို တှပွေီ့း ဒီလိုဖွဈနတောမြားလား။
အို.အို..နှယျနီသိမျ့သိမျ့တုနျသှားရပွနျသညျ။ စောကျဖုတျလေးထဲမှလညျး ဘာတှမှေနျးမသိ ညှဈထုတျလိုကျမိသလို။ နှယျနီမနနေိုငျတော့။ စကပလြေးအောကသြို့လကလြွှိုလိုကပြှီး စောကဖြုတကြလေးကို ကိုငစြမြးလိုကမြိသညြ။ သူမကအိမျမှာနရေငျးမို့ ဘာအောကျခံကိုမှမဝတျတတျ။ ဟငျ… သူမစောကျဖုတျလေးတဈခုလုံး အံ့သွလောကျအောငျခုံးထမာကြောနပွေီး အရညျတှကေလညျး အတျောမြားမြားပငျစိုရှဲနအေောငျထှကျကနြသေညျ။ အရညျတှကေလညျး လကျနဲ့ထိမိလိုကျတော့ ခြှဲကြိစေးထနျး နသေညျ။
“အို.အိုး.အမအေို့းကောငျးလှခညျြလား… အရသာရှိလိုကျတာပါလား..” စိတျထဲနဲနဲကနြေပျသှားသညျ။ “ဟငျကြှတျ..”ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျနသေော ဟိုလူကွီး ထိုငျနရောမှ အထ သူမနှငျ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျမိပွီး လူကွီးက ပွုံးပွ၍လှညျ့ထှကျသှားသညျ။ ငါ့နှယျ နျောသသော သလေိုကျခငျြတာပဲ။ တဈကိုယျလုံး ထူပူသှားသော နှယျနီ တဈယောကျ အိပျယာပျေါသို့ ဝုနျးခနဲပဈလှဲခလြိုကျမိလတေော့သညျ။
“ဟာ.ကိုခငျအေးပွနျတော့မလို့လား” “ဟုတျတယျ ကိုကြျောစိနျ ဒီနခေ့ငျဗြားက ငှထေုတျပေးထားတော့ ခငျဗြားကိုပွုစုရအုံးမယျ” “ဟာရပါတယျ.ဗြာ..” “ကဲမငျးပွနျတော့…”ကိုခငျအေးက သူ့တပညျ့ကောငျလေးကို လှညျ့၍ ပွောလိုကျသညျ။ “ဟုတျကဲ့..ဆရာ..” “လာဗြာ ကိုကြျောစိနျဆိုငျက လမျးထောငျ့တငျ ရှိတာပဲ လိုကျခဲ့ဗြာ” “အဲ.ခဏလေး.နျော” ကိုကြျောစိနျက အိမျထဲဝငျ၍ ဧညျ့ခနျးထဲ၌ ရပျလိုကျသညျ။ “နှယျနီရေ.ဦးလေးအပွငျခဏသှားလိုကျအုံးမယျ” “ဟုတျ..” နှယျနီ၏တုံ့ပွနျသံအဆုံး ကိုကြျောစိနျသညျ ခငျအေးနှငျ့ အတူ လမျးထိပျရှိ စားသောကျဆိုငျသို့ထှကျလာခဲ့လသေညျ။
မှောကလြကြွ အိပျနလေို့လဲ ခံစားခကျြ ဝဒေနာက မပြောကျ။ ပကျလကျလှနျ အိပျတော့လညျး ဝဒေနာကမထူခွား။ နှယျနီ စိတျညဈမိသညျ။ တဈကိုယျလုံး နမေထိ ထိုငျမသာဖွငျ့ စိတျထဲတှငျ တဈခုခု လိုနသေလိုပငျ ဖွဈနရေသညျ။ စိတျကူးတဈခုရ၍ နှယျနီ လှဲနရောမှ ထ၍ သူမ၏ အိပျခနျးထဲမှ ထှကျလာပွီး ဒကျဒီတို့ အိပျခနျးကို ဖှငျ့၍ဝငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ဒကျဒီ စားပှဲအံဆှဲမြားတှငျ ဟိုရှာဒီရှာလုပျရငျး စီဒီခှတေဈခပျြကိုဆှဲယူ၍ စကျတှငျထညျ့ကာ ကွညျ့လိုကျသညျ။
အခှကေ အပွာကားဒီအခှေ ရှိတယျဆိုတာ အရငျကဒကျဒီတို့အခနျး ရှငျးပေးရငျး တှလေို့ စမျးကွညျ့ပွီးပွီ။ ကောငျးလိုကျသညျ့ ဇာတျကား၊ ဇာတျလမျးလညျး ဆုံးရော နှယျနီ စောကျဖုတျလေးလဲ ရှဲနဈလို့နသေညျ။ ပွီးတော့ ခံစားနရေသညျ့ ဝဒေနာကလညျး မသကျသာသညျ့အပွငျ မီးလောငျရာ လပေငျ့ ပိုလို့တောငျဆိုးလာသညျ။ နှယျနီ အခှကေို သူ့ နရောသူ ပွနျထားရငျး စားပှဲပျေါတှငျ ဝီစကီပုလငျးရသေနျ့ဗူးနှငျ့ ဖနျခှကျတို့အဆငျသငျ့တှလေို့ကျသညျ။
မူးမူးနှငျ့အိပျပြျောသှားရငျကောငျးမညျဟုတှေးမိကာ ဝီစကီနှဈပကျနီးနီးလောကျထညျ့၍ ရနှေငျ့ ရောပွီး သောကျပဈလိုကျသညျ။ အရငျက တဈခါနှဈခါလောကျ မွညျးစမျးသောကျကွညျ့ဖူးသညျ။ ခုလောကျတော့ မမြားပေ။
နှယျနီ အိပျခနျးထဲ ပွနျရောကျတော့ အူရိုငျးလေး ဖွဈ၍ အရကျရှိနျ အတျောတကျလာသညျ။ သူမကိုယျပျေါရှိ အဝတျအစား အားလုံးကို ဆှဲခြှတျပဈလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ သူမ၏ ဗလာကငြွးနသော ကိုယလြုံးကိုမှနရြှတှေ့ငြ လှညျ့ပတျကွညျ့ရငျး ပေါငျလေးနှဈဖကျကို ကှ၍ ကားပွီး ငုံ့ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ အို… သူမ စောကျဖုတျလေးမှ အရညျလေးတှေ အောကျသို့အမြှငျလေးတှတေနျးကာ တှဲလောငျးလေး ထှကျကလြာသညျကို တှလေို့ကျရသညျသူမ ဆူဝနေသေော သှေးသားဆန်ဒကိုဘယျလိုမှထိနျးမရတော့ပါ။
စောကပြတနြှုတခြမြးသားလေးနှဈခုကို လကညြှိုးလကမြတို့ဖှငြ့ ဖိ၍ ဟလိုကျသညျ။ နီရဲနသေော စောကခြေါငြးဝလေးတှငြ မနကြညြွးစလေ့ောကရြှိသော စောကျစကေ့လေးက ထိုးထိုးထောငျထောငျလေး ဖွဈနသေညျကို မှနျထဲတှငျအတိုငျးသား တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ။ မကျြလုံးလေးမှိတျကာ စိတျမှနျးဖွငျ့ လီးကိုမွငျယောငျကာစောကျပတျဝလေးကို လကျခြောငျးထိပျလေးမြားဖွငျ့ လှညျ့ပှတျပေးနမေိသညျ။
“အို…” အရသာရှိလှပမေယျ့ အားမရခငျြ။ ဘယျလိုလုပျရမှာလဲ။ နှယနြီမှနရြှမှေ့ လှညြ့ထှကခြဲ့ပှီး ကုတငစြောငြးတှငထြိုငလြိုကသြညြ။ ပှီးတော့ ပကလြကလြှနခြကွာပေါငကြား၍ စောကပြတဖြောငြးဖောငြးလေးကို ပှတြ၍ကလိမိသညြ။ နှယနြီသညြ နဂိုကထကှနသော ရမျမကစြိတကြို လကျဖွငျ့ ဖွဖြေောကျရငျး အပွာကားကို ကွညျ့ခဲ့ပွီး အရကျကိုပါ သောကျလိုကျမိလတေော့ သူမ၏ရာဂစိတျတှကေ အဆမတနျပငျ ထကွှလာရုံမက အရှကတြရားပငြ မရှိတော့သလောကျနီးနီးဖွဈလို့နပေါပွီ။
“ဟငျးဟငျး..အငျ့.အငျး…” ပှတျရငျးစောကျစကေ့လေးကိုထိမိတော့ ကငျြဆိမျ့တကျသှားသညျ။ ဒီတော့စောကျစကေို့ဖိ၍ပှတျသညျ။ စောကျခေါငျးထဲကိုတစုံတခု ထိုးထညျ့ခငျြသော စိတျတှကေလညျး ပွငျးပွထကျသနျလို့လာရသညျ။ မှိတျထားသော မကျြလုံးထဲတှငျတော့ သူမတှခေဲ့သညျ့ လီးကွီးကို အာရုံ မပွတျပေ။
“အငျး..ဟငျး..ဟငျး..ရှီးအ.ကွှီ..” အိပျခနျးတံခါး ပှငျ့သှားသံ ကွားသဖွငျ့ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ အထဲကို လှမျးဝငျလာသောကိုကြျောစိနျကို တှလေို့ကျရသညျ။ တဈနလေုံ့း မငွိမျးနိုငျတဲ့မီး အရကျပါ ထပျသောကျလာလိုကျတော့ ကိုကြျောစိနျတဈယောကျ ရဲဝံ့၍ နပေါပွီ။ အိပျခနျးထဲမှ ငွီးသံ သဲ့သဲ့ ကွားရ၍တံခါးကိုဟကွညျ့လိုကျရာနှယျနီတဈယောကျဖွဈခငျြတိုငျးဖွဈနတောတှလေို့ကျရတော့ကိုကြျောစိနျခကျြခငျြးပငျအခနျးထဲသို့လှဈခနဲဝငျလာခဲ့လိုကျတော့သညျ။
“ဟငျ…” ဦးလေးနှယျနီ မကျြလုံးလေးတှေ ဝိုငျးသှားရစဉျကိုကြျောစိနျက အခနျးထဲ အရောကျ မတျတတျရပျ၍ ပုဆိုးကိုခြှတျခပြဈလိုကျသညျ။ အိုကိုကြွောစိနရြှသေို့ လှမြးလိုကရြငြး သူ့အကွငျီကိုပါ ဆှဲခွှတလြိုကသြညြ။ ကိုယျလုံးတီးဖွဈသှားပပွေီ။ နှယျနီလူးလဲထလိုကျပွီး သူမ၏ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးလေးကို ကုတငျစောငျးတှငျ ဒူးထောကျ၍ထိုငျလိုကျသညျ။ ရှသေို့လှမြးလာသော ကိုကြွောစိနြ သူမနှငြ့လကတြဈကမြးအကှာသို့ ရောကလြာသညြ။
“နနေအေုံး..ဦးလေး..” ကိုကြျောစိနျရပျလိုကျသညျ။ နှယျနီက အိပျယာပျေါတှငျပငျ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလိုကျပွီး လကျတဈဖကျကနောကျသို့ပွနျ၍ ထောကျကာ လီကို ကွညျ့ရငျး စောကျပတျထဲ လကျခလယျ ထိုးထညျ့ကာကလိသညျ။ နှယျနီ၏ လကျခလယျက စောကျပတျထဲသို့ ပို၍ ပွငျးပွငျးထနျထနျ မွနျမွနျဆနျဆနျ ဖွငျ့ အသှငျးအထုတျလုပျလာသညျ။
“အငျးဟငျး.အငျ့.အငျး” အနီးကပျ တှနေ့ရေသော ကိုကြျောစိနျ မနနေိုငျတော့။ “နှယျနီလေး..သမီး စောကျပတျလေးထဲ ဦးလေိးုလိုးထညျ့လိုကျရငျ ဒီထကျပိုကောငျးမှာ ..သမီးရဲ့..” “ထညျ့.ထညျ့လေ.လာ..လာ..” နှယျနီက လကျတဈဖကျဖွငျ့ လှမျးဆှဲချေါသညျ။ ရှသေို့ တိုးကပျလာပွီး ကိုကြျောစိနျက ကုတငျပျေါမှနှယျနီကို ကုတငျစောငျးတှငျ ကနျ့လနျ့ဖွတျ လှဲစပွေီး သူမ၏ ခွနှေဈခြောငျးကို သူ့ပုခုံးတဖကျစီတှငျတငျကာ လီးကို စိုရှဲနသေော စောကျပတျအဝတှငျ တကေ့ပျလိုကျသညျ။
“သှငျးသှငျးတော့လေ” “ဗွဈ.ဗွဈဖှတျ” “အားအီးအားအမေ့.အီး…” စိတျမထိနျးနိုငျတော့သော ကိုကြျောစိနျကအဆုံးဝငျအောငျ တဈခကျြတညျးဆောငျ့၍ သှငျးခလြိုကျသညျ။ နှယျနီတဈယောကျ ကော့တကျသှားပွီး တဈကိုယျလုံးတဆတျဆတျတုနျနရှောသညျ။ ကိုကြျောစိနျငုံ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ မဆနျ့မပွဲဖွငျ့ စောကျပတျလေးအဝမှ သှေးစီးကွောငျးလေးတှလေို့ကျရသညျ။ လကျလှမျး၍ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေိုခပြေေးလိုကျသညျ။
“လုပျ..လုပျလဦေးလေးရ..အ..အမလေး..လေး” “နှယျနီလေး…” “အငျး..အငျး…” “ကောငျးလား..” သှေးထှကျနမှေနျးသိ၍ နာကငျြမှုသကျသာအောငျ အဆောငျ့ရပျပွီး နို့တှကေိုကလိပေးနရောမှမေးလိုကျသညျ။ “အငျးဟငျး..လုပျ.လုပျ..နာနာလေးကောငျးကောငျးတယျ… ဆောငျ့ပေးပါ.အားအငျ့.. အမေ့.တအားဆောငျ့ပေးပါ.. အအား… ဆောငျ့စမျးပါ ဦးလေးရဲ့ .. ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား… ကြှတျကြှတျ… အငျ့..ဟငျ့…”
ကိုကြျောစိနျ သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို ဖိညှဈဆှဲကိုငျပွီး အသားကုနျ ဆောငျ့လိုးပါတော့သညျ။ “ဗွဈ..ဘှတျပလှတျ.ဖှတျ..ဗွဈ” “အား.အငျးအငျ့အ..အမအေ့ား.အိ..အ…” နှယျနီခါးလေးကော့တကျကာ ခေါငျလေးဘယျညာရမျးခါရငျး တဈခြီ ပွီးသှားသညျ။ မပွီးသေးသော ကိုကြျောစိနျက အရှိနျကို လွှော့၍ တဈခကျြခငျြး ဆောငျ့ပေးသညျ။ နှယျနီအာသာပွသေေးပုံမရ။ စောကျပတျထဲမှ တလှုပျလှုပျတရှရှဖွငျ့ ဖဈြညှဈဆုပျနယျပေးနသေလို တဈခကျြခငျြးဆောငျ့ပေးနရောမှ ခဏအကွာနောကျတဈခြီအတှကျ အပွီးလိုးရနျ အိုငျထှနျးရှဲနဈနပွေီးခြျောခြှတျခြှတျ ဖွဈနသေော အရညျမြားကို သုတျပေးရနျ ရညျရှယျ၍ ကိုကြျောစိနျ ဖွေးဖွေးခငျြး ဆှဲထုတျလိုကျသညျ။
“အိုး.မထုတျ..မထုတျနဲ့လေ လုပျလုပျလုပျလေ ဦးလေးကလဲ ကြှတျ..ပွောလိုကျရတာနျော..ဟငျ့ဟငျ့..” “လိုးပါ့မယျ..နှယျနီရဲ့တျောကွာ နှယျနီလေးကသာ နာတယျ တျောပွီ မပွောနဲ့” “အံမာ.ဦးလေးကလား နှယျနီခံနိုငျအောငျခံမယျ…”
“စိနျလိုကျ..လေ ” ဦးလေးတဈညလုံးလိုးပေးမလား..ဦးလေး အားကုနျသာလုပျ ကှဲခငျြကှဲသှားပလစေ့ေ.. ဦးလေးဟာကွီးသာ မထုတျပဈနဲ့… နှယျနီအောငျ့ပွီး ခံနိုငျအောငျခံမယျ” နှဈယောကျသား တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျကွညျ့ရငျး ပွုံးလိုကျကွကာနှယျနီက မကျြလုံးလေးနှဈလုံးကို မှိတျခလြိုကျပါလတေော့သတညျး။ ။ ပီး
“မောငျးတော့..” “ဦးလေးဘယ်ကိုဝင်ဦးမလဲ.နွယ်နီ” “အင်း..မရှိတော့ပါဘူး..အိမ်ကိုပဲပြန်တာပေါ့” နွယ်နီလွိုင်စဉ်းစဉ်းစားစားနှင့် တွေးတွေးဆဆလေးပြောသည်။ ပြီးတော့ ချက်ချင်းပင်ကိုကျော်စိန်ရှိရာဖက်သို့လှည့်လိုက်ပြန်သည်။
“အော်.မေ့လို့.ဟို.ဒယ်ဒီမှာခဲ့တဲ့ကိစ္စလုပ်ရဦးမယ်.ဦးလေး.၊ပန်းရံသမားတွေ ဆင်းခိုင်းဖို့လေ ” “အင်း… ခုပဲအဲဒီဖက်ကိုတစ်ခါတည်းလှည့်ဝင်လိုက်မယ် အစ်ကိုကြီးက ဒီတစ်ခေါက်ကြာမယ်နဲ့တူတယ်..” “ဟုတ်တယ်.ဦးလေး.ဒက်ဒီနဲ့မာမီက မာမီ့တူမ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ မန္တလေးကပြန်မှာဆိုတော့ တစ်လနီးပါးလောက် ကြာလိမ့်မယ်နဲ့ တူတယ်”
“နွယ်နီ့ အန်တီလေးက အိမ်မှာလာနေပေးမှာပေါ့..” “ဟုတ်တယ် ဦးလေး သူလာပြီး မနေလဲ နွယ်နီ့သူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် အိမ်မှာခေါ်ထားလိုက်ရုံပဲ အန်တီလေးက ဒက်ဒီ့ညီမဆိုပေမယ့် ဖအေတူမအေကွဲညီမလေ… ဆိုးလို့ အိမ်က ပစ်ထားတာ ပြန်ခေါ်တာတောင် တစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူး.. အရင်တစ်ခေါက် အစ်ကိုကြီးတို့သွားတုန်း မာလာခိုင်ဒီမှာလာနေတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ.. ဒီမှာကတော့ ခဏပဲလာနေတာလေ… ပြီးတော့ ဒက်ဒီ့အိမ်လဲဖြစ် နွယ်နီကလဲ ရှိတော့သူငြိမ်နေတာပေါ့…” “ဒါပေမယ့် အန်တီလေးက နွယ်နီ့အပေါ်တော့ ကောင်းပါတယ် အရင်တစ်ခါကလို ညနေကျရင် မာလာခိုင်ကို ဦးလေး သွားခေါ်ပေးရဦးမလား…”
“အန်တီလေးက ဖုန်းဆက်ထားတယ်… ညနေကျရင် သူ့ဖာသာပဲ လာခဲ့မယ်တဲ့… ဦးလေးသွားခေါ်ဖို့ မလိုတော့ဘူး..” “အင်းအင်း” ကိုကျော်စိန်နှင့်နွယ်နီလွိုင်တို့နှစ်ယောက်သား စကားစပြတ်သွားကြသည်။ စကားပြောရင်း မာလာခိုင်၏ အကြောင်းပါလာတော့ ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ရင်ထဲနွေးသွားမိသည်။ အသက်(၃၀)လောက်ပင်ရှိသေးသော မာလာခိုင်၏အလှက အသက်(၄၀)ကျော်လူပျိုကြီး ကိုကျော်စိန်၏ရင်ကို စွဲငြိစေခဲ့တာတော့ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် မာလာခိုင်က သူ့အလုပ်ရှင်အစ်ကိုကြီးဦးထွန်းခိုင်၏ ညီမဖြစ်တာကတစ်ကြောင်း၊ နောက်ပြီး မာလာခိုင်ကခေသူမဟုတ် ဒီအသက်အရွယ်နှင့် ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရခဲ့ဖူးပြီးပြီ။ မာလာခိုင်၏ ပထမ ယောက်ျားက သူမတို့အိမ်မှ ဒရိုင်ဘာဖြစ်ပြီး ဒုတိယယောက်ျားက ထိုဒရိုင်ဘာ၏ ညီအရင်းဖြစ်လေသည်။ ဒါတွေကြောင့်လည်း သူမကို မိသားစုတစ်ခုလုံးက ဖယ်ကျင်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီလိုအကြောင်းများကြောင့် မာလာခိုင်အား ကိုကျော်စိန် လကျရှောငျခဲ့ခွငျး ဖြစ်သည်။ နို့မို့ဆိုရင်တော့ ကျော်စိန်ဆိုတာကလည်း ခေသူမှ မဟုတ်တာ။
လူပျိုကြီးတွေ လူပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းက နှစ်ရပ်ရှိသည်။ နုံလွန်းလျင်လည်း လူပျိုကြီး ဖြစ်တတ်သည်။ လည်လွန်းလျင်လည်း လူပျိုကြီဖြစ်တတ်သည်။ကိုကျော်စိန်က ဒုတိယအမျိုးအစားထဲက လည်လွန်း၍ လူပျိုကြီးဖြစ်ရသူတစ်ယောက်ပင်။ မောင်းလာသော ကားလေး လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တရိပ်ရိပ်ပြေးလွားမောင်းနှင်၍ လာရင်း တစ်နေရာအရောက် ဆောက်လက်စ တိုက်ကြီးတစ်လုံး၏ ရှေ့တှငျ ထိုးရပ်လိုက်သည်။ ပြီး ကားဟွန်းသံ နှစ်ခါလောက်ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခိုက် ဆောက်လက်စ တိုက်ကြီးဆီမှ လူတစ်ယောက် သူတို့ကားလေးရှိရာသို့ ဦးတည်၍ပြေးထွက်လာသည်။ အသားညိုညို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ကိုယ်လုံးကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ဖြင့် အသက်၃၀ကျော်လောက်ရှိပြီဟု ခန့်မှန်းရသည့် ထိုသူက သူတို့၏ရပ်ထားသော ကာလေးဘေးသို့ အရောက်ရပ်လိုက်သည်။ကားတံခါး မှန်အား ကိုကျော်စိန်က ချလိုက်သည်။ ထိုနည်းတူ နွယ်နီလွိုင်ကလည်း သူမဖက်ရှိကားတံခါးမှန်ကို ချလိုက်ပြီး လက်ထဲမှ ပီကေဗူး အခွံလေးကို အပြင်သို့ လွင့်ပစ်လိုက်သည်။
“ကိုခင်အေး.. ခင်ဗျားတို့ အလုပ် လာဆင်းလို့ရပြီ. ပစ္စည်းတွေ အစုံရောက်နေပြီ၊ ဘိလပ်မြေကမနက်ရောက်မယ်၊ အစ်ကိုကြီးက ကားဂိုဒေါင်ကို တစ်လအတွင်း အပြီးလုပ်ပေးဖို့ မှာသွားတယ်… ဒီမှာကလည်း အလုပ်ကမပြတ်သေးဘူး.. အစ်ကိုကြီးကတော့ မနက်ဖြန် စပြီးလုပ်ဖို့ မှာသွားတာပဲ.. ဘယ့်နှယ့်လဲ ဆင်းနိုင်ပါ့မလား” “မနက်ဖြန်တော့ ဆင်းနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးဘူးနဲ့တူတယ်” “မဖြစ်ဘူး အစ်ကိုကြီးက ခင်ဗျားတို့ မလုပ်နိုင်ရင် တခြားလူကို ခေါ်ခိုင်းဖို့ မှာထားတယ်..” “ထြီ ..” တိုးလည်း မတိုး ကျယ်လည်းမကျယ်၊ သာမနျမှသြော အသံဖြင့် နွယ်နီ တံတွေးတစ်ချက်ထွေးလိုက်သည်။ ပြီးသူမစိတ်ထဲမှလည်း ဟင်းသူကများ ဟူသော အတွေးဖြင့် မျက်နှာလေး မာတင်းခက်ထန်သွားရသည်။
“ကောင်းပြီလေ.မနက်ဖြန်တော့ မလုပ်နဲ့သန်ဘက်ခါလာပြီး ဆင်းပေးပါ့မယ်…” “လာဖြစ်အောင်တော့ လာခဲ့ ကိုခင်အေး ကဲ..ဒါဆို ကျုပ်တို့လဲ သွားမယ်” “အင်း..” စကားလည်းဆုံးရော မောင်းထွက်သွားသည့် ကားလေးကို ကြည့်ရင်း ပန်းရံဆရာ ကိုခင်အေးပြုံးလိုက်မိသည်။ ကားပေါ်မှကောင်မလေး အတော်လှ၍ သူစကားပြောရင်းငေးကြည့်လိုက်မိသည်။ ဒါကို ကောင်မလေးက မတူမတန်သလိုပုံနဲ့ ထွီခနဲ တံတွေးတစ်ချက် ထွေးလိုက်တာကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ဒီလိုပါပဲ ဒါမျိုးလေးတွေက ဟင်းမတွေ့သေးလို့ပါ၊ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီ ဆိုတော့ ဒီကဖြင့်ဘာမှ မဖြစ်သေး၊ သူတို့က တဖျန်းဖျန်း ပြီးနေတတ်တာလေးတွေဟုတွေးရင်း ခင်အေးသည် ရပ်နေရာမှ လှည့်ထွက်ခဲ့လေတော့သည်။
မနက် မိုးလင်းသည်နှင့် ကိုကျော်စိန်က ရောက်နှင့်နေပြီးနွယ်နီနှင့် မာလာခိုင်တို့တူဝရီးကိုဈေးသို့ပို့ပေးရသည်။ ဈေးတွင် စားသောက်ဝယ်ခြမ်းပြီး ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ နွယ်နီအား ကျူရှင်သို့ ဝင်ပို့ခဲ့ပြီး မာလာခိုင်ကိုအိမ်သို့ပြန်ပို့ပေးရသည်။ ကားပျေါမှ နှယျနီဆငျးသှားသညျနှငျ့ မာလာခိုငျတဈယောကျ ရှေ့ခနျးသို့ ပွောငျး၍ ထိုငျသညျ။ မွေးကြိုင်သော ရနံ့လေးများက ကိုကျော်စိန်အား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လာသည်။
မာလာခိုင်၏တောင့်တင်းတုတ်ခိုင်သော ပေါင်တန်ကြီးများက လုံးတစ်နေပြီး၊ အကငြ်ီထဲမှ တိုးထှကျတော့မယောငျနို့အုံကွီးမြားက ကိုကျြောစိနျ၏မကျစြိရှေ့ဝယျ အလှပွနသေလိုဖွဈနသေညျ။ စကားမရှိစကားရှာ၍ပြောရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် စိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်သော မာလာခိုင်၏ မျက်လုံးရွဲကြီးများက ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ဘရိတ်ကို နင်းလိုက်မိသည်အထိ စိတ်တွေ ဂယောက်ဂယက်ဖြစ်စေသည်။
ကိုကျော်စိန် သက်ပြင်းတွေ အခါခါ ချရင်း ကားကိုသာ ဂရုစိုက်၍ မောင်းနှင်လာခဲ့ရသည်။ အိမ်ပြန်အရောက် ကားကို ခြံဝင်းထဲ ကွေ့ဝင်လိုက်တော့ ပန်းရံများ ရောက်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကားဝင်လာတာ မြင်ရသည်နှင့် ခင်အေးက ပေါ်တီကို အောက်သို့ ခပ်သုတ်သုတ် ထလာသည်။ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် မာလာခိုင်က ဈေးခြင်းတောင်း ဆွဲ၍ ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ အိမ်သော့ကို ဖွင့်ဝင်သွားသည်။
ကားဘေးတွင် ရပ်နေသော ခင်အေး၏ မျက်လုံးများက မာလာခိုင်၏ နောက်သို့ ပါ၍သွားသည်။ ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသော ကိုကျော်စိန်ကိုပင် ဂရုမစိုက်နိုင်ပေ။ ကိုကျော်စိန်၏ စိတ်ထဲ ခပ်တင်းတင်း ဖြစ်၍ သွားရသည်။ ကိုကျော်စိန်ဒီနေ့ ကျနော်တို့ စဆင်းမယ် အင်းမြင်ကွင်းမှ မာလာခိုင် ပျောက်ကွယ်သွားမှ ခင်အေးက ကိုကျော်စိန်ဖက်ကို လှည့်၍ ပြောသည်။
ကိုကျော်စိန်ကစိတ်မပါသလိုအင်းလိုက်ရင်း ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ထိုင်နေသော ပန်းရံများကိုကြည့်လိုက်သည်။ “ဟင်.မင်းနဲ့မှသုံးယောက်ထဲလား..” “ဒီနေ့တော့ ကျနော်နဲ့ ဟိုစွပ်ကျယ်ဝတ်ထားတဲ့ ကောင်လေး နှစ်ယောက်ထဲ ဆင်းမှာ..၊ ရှပျအကငြ်ီ နဲ့ကောင်က ဟိုဖက်ဆိုက်ထဲ လွတ်လိုက်ရမှာ..၊ သုံးလေးရက်လောက် နေမှ ဒီမှာ အကုန်လာဆင်းမယ်..၊ ကျနော့်လူအားကတော့ ခင်ဗျားသိတဲ့ အတိုင်းပဲ” “အေးလေ. ဒီနေ့စဆင်းရင် ပြီးတာပဲ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာ အစ်ကိုကြီးက မင်းကို ပြောထားပြီးပြီမဟုတ်လား…” ” ပြောထားပြီးပါ ပြီ”
“ကဲ.ဒါဆိုလဲစလုပ်တော့…” စကားစကိုဖြတ်၍ ကိုကျော်စိန် တိုက်ထဲ ဝင်လာခဲ့ပြီး ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်၍ ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုယူကာ ဖတ်နေသည်။ ကိုကျော်စိန်၏ စိတ်က ဂျာနယ်ထဲသို့ ရောက်၍ မသွား ၊ မာလာခိုင် ထံသို့သာရောက်နေသည်။ ဂျာနယ်ကို ကြာကြာမဖတ်နိုင်။မာလာခိုင်ကိုတွေ့မြင်ချင်စိတ်က ပြင်းပြလာ၍သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးပင်စွာ ချ၍ ကိုကျော်စိန် ထရပ်လိုက်သည်။ “အိုး.ကိုကျော်စိန်ကြီးကလဲ အသံမပေး ဘာမပေးနဲ့၊ ဒီမှာ အဝတ်လဲနေတာ..” ထမီကို ရင်လျားရန် လက်နှင့် စုကိုင်ရင်း ပြောလိုက်သော မာလာခိုင်၏ ဖွေးဖွေးနုနု နို့အုံနှစ်လုံးကနို့သီးထိပ်လေးမှ လွဲ၍ အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ မာလာခိုင်က အဝတ်လဲတာ အိပ်ခန်းထဲတွင် မဟုတ်ပဲမီးဖိုထဲတွင် ဖြစ်နေသည်ကို ကိုကျော်စိန် မစဉ်းစားတတ်။ လက်တစ်ကမ်း အကွာတွင် မြင်တွေ့နေရသောမာလာခိုင်၏ ရင်သားအိအိများ အလှတွင်သာ စွဲငြိနေသည်။ ဗြုံးခနဲ ကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရ၍ အံအားသင့်သွားလို့လား မပြောတတ်။
ထမီကို ခုချိန်ထိ ရင်လျားမဝတ်သေး။ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်၍ ကြောင်ကြည့်နေပြီးမှ မာလာခိုင်က မျက်လွာချကာထမီကို ဝတ်ရန် ဖြန့်လိုက်သည်။ အောကျဖကျကိုလြှောကသြှားသော ထမီ အပေါ်နားစက နို့နှစ်လုံးလှစ်ဟပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ “အို.အာ့.မလုပ်နဲ့.မလုပ်နဲ့အား.ကို.ကိုကျော်စိန်ကြီးနော် အိုအို မလုပ်နဲ့နော်မလုပ်နဲ့လို့..” အိမ်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်ထဲသာ ရှိသည်ဟူသော အသိနှင့် မာလာခိုင်၏ အကျင့်စရိုက်ကို သိထားသောကိုကျော်စိန်က မာလာခိုင်၏ ခါးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်အားယူဆွဲပွေ့ရင်း နို့တစ်ဖက်ကိုငုံ့၍ စုပ်လိုက်သည်။ ရင်ဘတ်လေးကော့တက်သွားသော မာလာခိုင်က အထစ်ထစ်အငေါ့ငေါ့ဖြင့်နွုတ်မှ တားနေသော်လည်း ကိုကျော်စိန်က အရေးမစိုက်တော့ပါ။
မာလာခိုင်ကလည်း အသည်းအသန်ရုန်းကန်ခြင်း မပြု။ ကျန်နို့တစ်ဖက်အား ကိုကျော်စိန်ကလက်ဖြင့်ညှစ်၍နယ်သည်။တင်းနေသော နို့အုံလုံးလုံးကြီးတွေက ကိုင်ရတာ အရသာတွေ့လှသည်။ ထမီစကိုကိုင်ထားသော သူမလက်နှစ်ဖက်က တဖြည်းဖြည်းအောက်ဖက်သို့ နိမ့်ဆင်းလာသည်။ “အိုရှင်တော်.တော်ပါတော့.တော်ပြီ ကျမကို လွတ်ပါတော့..ရှင်” မျက်နှာလေး မော့ရင် ပြောနေသော မာလာခိုင်၏ မျက်နှာလေးမှာ ပြုံးယောင်သမ်းရင်း နီမြန်းနေသည်ကိုတော့ ကိုကျော်စိန်မမြင်။ နို့ကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး စို့နေသည်။ တစ်လုံးပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကို ပြောင်း၍ စို့ပြန်သည်။ “အို..မလုပ်နဲ့..တော်ပါတော့ဆို.ဟင့်ကျွတ်.အအား.” မတ်တတ်ရပ်နေသော မာလာခိုင်၏ ဒူးဆစ်လေးများ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။ ညွတ်၍ကျချင်လာသည်။
လူပျိုကြီးသာ ပြောရတယ်၊ နို့စို့တာက ပညာသားပါလှသည်။ နို့သီးကိုတအားငုံစုပ်ရင်း လြှာထိပျနှငျ့ များ ကော်ကော်ထိုးလိုက်တာ မာလာခိုင် ရင်ခေါင်းထဲအထိ ကြပ်ကြပ်သွားရသည်။ မျက်စေ့ကို စုံမှိတ်ထားသော မာလာခိုင်၏ လက်ထဲမှ ထမီစက လွတ်ကျချင်လာသည်။ တဖွေးဖွေးလြှောကသြှားသော ထမီစကြောင့် လစ်ဟာသွားသော သူမ၏ ကျောပြင် ပြည့်ပြည့်လေးကို ခါးတွင်ဖက်ထားသည့် ကိုကျော်စိန်၏ လက်များက ရွေ့လျား လြှောတိုကျ၍ ပွတ်သပ်ပေးသည်။ ပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်ကပါ သူမ၏ နောက်ကျောသို့ရောက်လာပြီး ကားစွင့်မို့မောက်နေသော တင်ပါးကြီးတွေကိုဖျစ်ညှစ်သည်။
နှစ်ယောက်စလုံး တုန်တုန်ရီရီဖြစ်ကာ အသက်ရှူသံတွေပြင်းထန်နေကြသည်။ ပြွှတျခနဲ မြည်သံနှင့် အတူ ကိုကျော်စိန်က နို့ကို လွတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်သူ၏ လက်များကိုလည်း မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဖယ်လိုက်သည်။ “အဟင်း..” ဆိုတဲ့ သက်ပြင်းချသံလေးကို ပြုလျက် မာလာခိုင်တစ်ယောက် ထမီ စွန်တောင်ဆွဲလျက်သားအိပ်ခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားသည်။ သူမ၏ နောက်ကျောမှ လြှောကနြသော ထမီက အိပ်ခန်းထဲသို့ခပ်သွက်သွက် ပြေးဝင်သွားသော မာလာခိုင်၏ တသိမ့်သိမ့် တုန်ခါသွားသည့် တင်သားအိအိကြီးများကိုအတိုင်းသားနီးပါး လှစ်ဖော်၍ နေသည်။
သူမ၏ နောက်ဖက်မှ ကိုကျော်စိန် လိုက်လာသည်။ အိပ်ခန်းထဲ အရောက် မာလာခိုင်က ကုတင်ပေါ်ကအိပ်ယာထက်သို့ သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို ဝုန်းခနဲ ပင် လှဲ၍ အချ အနားသို့ ရောက်လာသော ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ကိုယ်ပေါ်ကိုငုံ့၍ဖက်ရင်း ကုတင်စောင်းသို့ ဒူးထောက်ကာတက်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက်မာလာခိုင်၏ ခါးစောင်းသို့ ဖိထောက်မိလိုက်သော အရာက သေးသေးကွေးကွေး မဟုတ်လှဟုသိလိုက်ရသော မာလာခိုင်တစ်ယောက် ရင်ထဲတဒိန်းဒိန်း နေအောင်ပင် ခုန်လို့သွားရလေသည်။ ကိုကျော်စိန်က အိပ်ယာထက်တွင် တစောင်းလှဲနေသော မာလာခိုင်ကို ပက်လက်ဆွဲ၍ လှန်လိုက်သည်။
မာလာခိုင် ဘာစကားမှ မဆိုတော့၊ မျက်လုံးတွေကို စုံမှိတ်ထားရင်း မျက်လုံးများ အပေါ်၌ သူမ၏လက်ဖျံတစ်ဖက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်၍ တင်ထားလိုက်သည်။ တရှူရှူး တရှဲရှဲဖြင့် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းထန်နေသော ကိုကျော်စိန်က သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲထောင်၍ ထမီကို ခါးသို့ လှန်တင်လိုက်သည်။ မာလာခိုင်၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ရှိသောတစ်ထည်တည်းသော ထမီလေးမှာ ခါးနှင့် ဝမ်းဗိုက်ပေါ်တွင် ပုံလျက်သား ။
သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးမှာဖွေးဖွေးနု၍ တင်းရင်း ဝင်းမွတ်နေသည်။ တငျထားသော လကျအောကျမှမကျလြုံးကို ခပျမှေးမှေးလေးဖှငျ့ ကာကွညျ့နသော မာလာခိုငျစအိုလေးကိုပငျ တဈခကျရြှုံ့လိုကျမိသညျ။ ကိုကျြောစိနျက သူမ၏ပေါငျနှဈခြောငျးကို ကိုငျ၍ဒူးထောကျလကျရြှေ့သို့ တိုးလိုကျသညျ။ မာလာခိုင် ခိုးကြည့်နေသော မျက်လုံးများကိုပြန်၍မှိတ်ချလိုက်သည်။
“ကိုကျော်စိန်..ကိုကျော်စိန်..ဗျို့.ကိုကျော်စိန်” အိမျရှေ့မှ ခေါ်လိုက်သော ခင်အေး၏ အသံ။ နှစ်ယောက်စလုံး ဆတ်ခနဲ တုန်သွားကြသည်။ “ကိုကျော်စိန် ကိုကျော်စိန်..”
ခေါ်သံက ဧည့်ခန်းထဲသို့ပင် ရောက်၍ လာသည်။ ကိုကျော်စိန် ကမန်းကတန်း ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းကာပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်ရင်း အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက် မာလာခိုင်၏ ထံမှတောက်ခေါက်လိုက်သံကိုတော့ ရှေ့သို့ အာရုံရောက်နေသော ကိုကျော်စိန် မကြားလိုက်ရပေ။ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ရပ်နေသော ခင်အေးနှင့် ကိုကျော်စိန် မျက်နှာချင်း ဆိုင်မိသည်။
“ဘာလဲ..ကိုခင်အေး ဒီမှာအိမ်သာတက်နေတာ..” “ဟဲ.ဟဲ.” ကိုကျော်စိန်ကိုကြည့်၍ခင်အေးရယ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ “ဘိလပ်မြေမရောက်သေးဘူး အဲဒါ ပေးပါဦး..”
ဟင်ခက်ပြီ။ ဘိလပ်မြေဆိုင်၏ ဖုန်းနံပါတ်အား ကိုကျော်စိန် မသိ၊ နွယ်နီလွိုင်သာ သိသည်။ ဆိုင်သို့ ကားဖြင့်အရောက်သွား၍ ပြောရုံသာ ရှိသည်။ ပုဆိုးထဲမှ လီးကလည်း တောင်နေတာမှ တဆတ်ဆတ် ခါနေသည်။ ဘိလပ်မြေမရောက်၍ ပန်းရံသမားများ ပြန်သွားရတာကို အစ်ကိုကြီး ပြန်လာ၍ သိသွားလျင်ကိုကျော်စိန်ဆက်၍မတွေးတော့။ လက်ပတ်နာရီကို မွှောကျ၍ ကြည့်သည်။ မနက် ၈ နာရီခွဲပြီ။ကိုကျော်စိန်ခေါင်းနပန်း ကြီးသွားသည်။ ၉ နာရီခွဲကို နွယ်နီလွိုင်အား သွား၍ ခေါ်ရအုံးမည်။ သူ မာလာခိုင်နှင့်တွေ့ဖို့ မလွယ်တော့။ ဘိလပ်မြေဆိုင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ခုချက်ချင်းပို့ရန်ပြော၍ နွယ်နီလွိုင်ကိုတစ်ခါတည်း တန်း၍သွားခေါ်ရန်သာ ရှိတော့သည်။
“ဟင်းခုပဲ ကျုပ်သွားလိုက်မယ်…ဟဲဟဲ” တဟဲဟဲ ရယ်၍ ရယ်ကြဲကြဲ လုပ်နေသော ခင်အေးကို နားမလည်နိုင်စွာဖြင့် တချက် ခေါင်းငဲ့၍ ကြည့်ပြီးနှစ်ယောက်သား အတူတူပင် အိမ်ထဲမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ မာလာခိုင်တစ်ယောက် သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်သွားမိရသည်။ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားသောကိုကျော်စိန်၏ ကျောပြင်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း တောက်တစ်ချက် ခေါက်လိုက်မိသည်။ သူမ စိတ်ထဲမှာ အလိုးခံချင်သည့်စိတ်ဆန္ဒတွေက ထိန်းမရအောင်ဖြစ်ပေါ်လို့နေသည်။
အတော်ပင်ခံစားရခက်နေသည်။ မာကျောသော အရာဝတ္ထု တစ်ခုခုကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းထိုးထည့်ချင်နေသည်။ အိပ်ယာထက်တွင် လူးလှိမ့်ရင်း ခါးတွင် ပတ်၍ ပုံနေသော ထမီကို စိတ်မရှည်စွာဖြင့် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ မာလာခိုင်၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ရောက်သွားပြီး စောက်ဖုတ်ကို စမ်းလိုက်သည်။ အမွေးထူထူဖြင့် စောက်ဖုတ်ကြီးက နဲနဲနောနောမဟုတ်။ အဆမတန် ခုံးထနေသည်။ ရွဲနစ်အောင် ထွက်နေသော စောက်ရည်များကိုလည်း စိုခနဲ စမ်းမိလိုက်သည်။
လက်မထိပ်လေးနှင့်စောက်စေ့ကလေးကို ပွတ်ရင်း လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးထည့်ရန် ပြင်လိုက်သည်။ ဒီလို လုပ်လို့မဖြစ်။ အပျိုဖြစ်ကထဲက သူမ၏ စိတ်ဆန္ဒကို ဘယ်သောအခါမှ လက်ဖြင့် မဖြေဖျောက်ခဲ့။ မာလာခိုင်စောက်ဖုတ်ပေါ်မှ လက်ကိုဖယ်လိုက်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။ ထိုအခိုက် ပူနွေးမာကျောသော အရာတစ်ခုက သူမ၏ပေါင်ရင်းဘေးဖက်သို့ လာ၍ ထိတွေ့သည်။ ဖြတ်ခနဲ ဖြစ်သွားရင်းမာလာခိုင် မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
“ဟင်ရှင်.ရှင်” မာလာခိုင် အံ့သြထိတ်လန့်စွာဖြင့် ထထိုင်မိမတတ် ဖြစ်သွားသည်။ သူတွေ့လိုက်ရသည်ကကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ပန်းရံဆရာ ခင်အေးပင် ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကြမ်း သမားပီပီ သန်မာကျစ်လျစ် ဖုထစ်သော ခင်အေး၏ အဝတ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို တွေ့လိုက်သော မာလာခိုင်အား တဒင်္ဂ ငြိမ်သက်သွားစေသည်။ “မင်းလေး..သိပ်ပြီး အလိုးခံချင်နေတယ် မဟုတ်လား မင်း မကြုံဖူးသေးတဲ့ အရသာမျိုး ခံစားရအောင် ကိုယ်လုပ်ပေးပါ့မယ်”
စိုက်ကြည့်နေသောမာလာခိုင်တစ်ယောက် ခါးလေးကော့တက်မတတ် စအိုဝကိုရွုံ့ရွုံ့သွင်းမိနေရင်း စောက်ရည်ကြည်တွေ ထပ်၍ စိမ့်ထွက်လာသည်။ ခင်အေး ငုံ့၍ မာလာခိုင်၏ ကိုယ်လုံးကို ပွေ့၍မယူလိုက်သည်။ ခင်အေး လက်ထဲ စွေ့ခနဲ ပါသွားသော မာလာခိုင်က ခင်အေး ကိုကြည်နူးစွာဖြင့်ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလေး ကြည့်လိုက်သည်။ မိန်းမများသည် သူတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာအား ယောက်ျားကနိုင်နိုင်နင်းနင်း ချီမပွေ့ယူတာကို ကြည်နူးလိုလားစွာ ခံချင်ကြသည်ချည်း ဖြစ်သည်။
ခင်အေးက မာလာခိုင်အားကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်၍ တင်လိုက်သည်။ ကုတင်စောင်းလိုးနည်းဖြင့် လိုးတော့မည်ကို သိလိုက်သော မာလာခိုင်ကသူမ၏ တင်သားကားကားကြီးကို ကုတင်စောင်းတွင် အသားကျအောင် ပြုပြင်နေရာယူရင်း ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားလိုက်သည်။ သူမ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို မက်မောစွာ ကြည့်ရင်း ခင်အေး ရှေ့သို့ တိုးလာကာ စိုရွဲနေသော စောက်ပတ်ဝသို့ညီလေးကို မြုပ်အောင် ထိုး၍ အသွင်း မာလာခိုင်ကတွဲလောင်းချထားသော ခြေနှစ်ချောင်းကို မယူ၍ကုတင်စောင်းတွင် ဖနောင့်နှင့် နင်း ပေါင်ကိုကားကာ သူမ၏ တင်ပါးကြီးကို အစွမ်းကုန် ကော့၍ ကော့၍အောက်မှ ပင့်ကာ ကော့ထိုးပစ်လိုက်သည်။
“ပြွတ်.ဗြစ်..ဖြစ်..ပြွတ်.ဖွတ်အားဟင်း..” ခံချင်လွန်းနေသော မာလာခိုင်က အောက်မှ ကော့၍ ပင့်တင်ကာ ခြောက်ခါ ခုနစ်ခါလောက်လိုးလိုက်ပြီးတော့မှ တဒင်္ဂ စိတ်ကျေနပ်သွားပုံဖြင့် ခင်အေးကို မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ တစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ပြီး သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကုတင်ဘေးတွင် မတ်တတ်ရပ်နေသော ခင်အေး၏ခါးကို လှမ်းချိတ်ကာ ဆွဲယူလိုက်သည်။ မာလာခိုင်က အောက်မှ ပင့်၍ လိုးအပြီး တင်ပါးကြီးကို မွေ့ယာပေါ်ပြန်၍ အချ တဝက်သာသာ ကျွတ်၍ထွက်နေသော ညီလေးကို ခင်အေးက မာလာခိုင် သူ့ကို ခြေထောက်ဖြင့် ချိတ်၍အဆွဲ ညီလေးကိုပါ တပါတည်းလိုက်လိုးသွင်းသည်။
“အ.အ..အအား.ဟင်း ဟင်း..” မာလာခိုင် ရင်ဘတ်လေး ကော့ ခေါင်းလေးမော့၍ တက်သွားသည်။ စောစောက ရမ္မက်ဇောကြောင့်သာ အာသာငမ်းငမ်း ဖြင့် ပင့်လိုးခဲ့ပေမယ့် အထိုက်အလျောက် ကျေနပ်သွားရသော်လည်း ခုလို ထိထိမိမိ မရှိလှ။ အပျိုလည်း မဟုတ် ၊ ယောက်ျားတော်တော်များများနှင့် ကြုံခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်လင့်ကစား မာလာခိုင်မှာအပျိုစင်လေးပမာ တစ်ကိုယ်လုံး အသားတွေ ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ် တုန်နေပြီးလက်နှစ်လုံးလောက်အလို ခင်အေးက အားဖြင့် ဆောင့်၍တဆုံးသွင်းချလိုက်သည်။
“ဗြစ်ဖွတ်..အအမလေး.အ..ဟင်းဟင်း.လုပ်လုပ်… ဆက်ဆောင့်.. အမလေး..လေး…” ထောင်တက်နေသောစောက်စေ့ကလေးကို အားဖြင်ဆောင့်ကာ စောက်ပတ်အတွင်းနားသို့ ဖိသိပ်လိုက်သည်။ ကော့ခနဲဖြစ်သွားရပြီး တစ်ကိုယ်လုံးလွုပ်လွုပ်ရွရွဖြစ်ကာ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ခင်အေး၏ လက်မောင်းတွေကို မမှီမကမျး လှမ်း၍ ဆွဲဆုတ်လိုက်မိသည်။ ဒီလို နုနယ်ချောမော လှပလွန်းသော မိန်းမမျိုးကို မလိုးဖူးသေးသော ခင်အေးကလည်း မညှာတော့ပါ။ မာလာခိုင်၏ ဖွေးနုသော နို့နှစ်လုံးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနှင့် ဆွဲကိုင်ဖျစ်ညှစ်၍စိတ်ရှိတိုင်း ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။
“ပြွတ်.ပလွတ်..ဘွတ်.အားအမလေး.. အစ်ကိုရဲ့ အမလေးလေး.. ဟင်းဟင်းကောင်းလှချည်လား.နော်အင်း.. အင်း…” တအားဆောင့်နေသည့်ကြားမှ အားမရနိုင်ဖြစ်လာရသော မာလာခိုင်က သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုခင်အေး၏ ခါးမှ ဖယ်၍ မိုးပေါ်သို့ထောင်လိုက်သည်။
အမာလာခိုင်၏ ထောင်ထားသော ခြေနှစ်ဖက်က ရမ်းခါ၍ နေသည်။ မာလာခိုင် မျက်လုံး မပွင့်တော့။ ခင်အေး၏ ဆောင့်ချက်တွေက လြှော့မသှားသညျ့အပြင် ပို၍ပြင်းထန်သွက်လက်လာသည်။မကြာလှသောအချိန်တွင်တော့
“ပြွတ်..ပလွတ်..ပြွတ်..ဖွတ်ဖတ်..အားအ.အမလေး.. အိုအို… အမလေး… လး.အား..ပြီး.ပြီးအိုး.. ကောင်း.. ကောင်း အင့်အင့်.. ” မာလာခိုင်၏ တင်သားကြီး ကုတင်စောင်းမှ လွတ်ထွက်သွားသည်အထိ ကော့၍ ကော့၍ တက်လာပြီးအရေတွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ခင်အေးလည်း မကြာခင် ကိုကျော်စိန် ပြန်လာတော့မည် ဆိုတဲ့အသိနဲ့ နောက်ရက်တွေလည်း ရှိသေးတာပဲ ဟု တွေးကာ စိတျကိုလြှော့ကာ သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ရင်း ရှေ့သို့ငုံ့၍ မာလာခိုင်ကို ကြုံးပြီး ဖက်ထားလိုက်ပါတော့သည်။
“အန်တီလေး..နေကောင်းရဲ့လား” ငွေစက္ကူ တစ်ထပ်ကို ကိုင်၍ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသော နွယ်နီက မီးဖိုခန်းဝင်ပေါက်နားတွင် ရပ်လျက်ခန္ဓာကိုယ် လေးပင်စွာဖြင့် မလွုပ်ချင်လွုပ်ချင် လွုပ်ရှားချက်ပြုတ်နေသော မာလာခိုင်ကိုမေးလိုက်သည်။ “ကောင်းပါတယ်.နွယ်နီရဲ့ ညကအိပ်ရေးပျက်လို့ နုံးနေလိုပါ” ဖြေမိဖြေရာ ဖြေလိုက်သည်။ အင်းရပ်နေရာမှ နွယ်နီလှည့်ထွက်မည်အလုပ် မာလာခိုင်၏ အသံက ထပ်၍ ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။ အော် ဒါနဲ့နွယ်နီ.. ညကျရင် တို့မိန်းမသားနှစ်ယောက်ထဲ အဲဒါ ဦးကျော်စိန်ကြီးကို လာအိပ်ခိုင်းရင်ကောင်းမလားလို့”
“ကောင်းသားပဲ အန်တီလေးရဲ့ နွယ်နီပြောလိုက်ပါ့မယ်…”လှည့်ထွက်လာသော နွယ်နီ ဧည့်ခန်းထဲ အရောက် ဂျာနယ်ဖတ်နေသော ဦးကျော်စိန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။“ဦးလေး..ဟေ…ဒီမှာပန်းရံဆရာကိုကြိုပေးထားဖို့ ငွေသုံးသောင်း” “အော်အေးအေး..သမီး” ငွေကိုလှမ်းယူရင်း ကိုကျော်စိန်၏မျက်လုံးအစုံက အိမ်နေရင်း စကပ်တိုလေးဖြင့် လှချင်တိုင်း လှနေသောနွယ်နီ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ခပ်ရဲရဲ ကြည့်လိုက်သည်။ မနက်က မာလာခိုင်နှင့် အစပျိုးခဲ့သော ကိစ္စကကိုကျော်စိန်အား အတော် ဒုက္ခ ပေးနေသည်။ လီးက ကျတယ်ကို မရှိ။
“နောက်ပြီးအန်တီလေးက ပြောတယ်… ဦးလေးကို ညကျရင် အိမ်မှာ လာအိပ်ပေးပါတဲ့” “အင်း.အိပ်ပေးမယ်” ကိုကျော်စိန်စိတ်ထဲ ပျော်သွားသည်။ “ဒါနဲ့နွယ်နီ မာလာခိုင်ကို ဦးလေးလိုက်ပို့ပေးရမှာလား” “ခါတိုင်းတော့… သူအိမ်ပြန်ရင် သူ့ဖာသာ မောင်းသွားတာပဲ ညနေ သူပြန်လာမှ ကားကိုပြန်ယူလာမှာပေါ့.. ပြီးတော့ နွယ်နီလဲ ဘယ်မှ သွားစရာ မရှိတော့ပါဘူး ”
ကိုကျော်စိန် တစ်နေကုန် အားလပ်သွားပြီ။ ပြောပြီးသည်နှင့် လှည့်ထွက်သွားသော နွယ်နီ စိတ်ထဲ ဒီနေ့ ဒီလူကြီး အကြည့်က ဘာမှန်းလဲမသိဘူးဟုတွေးပြီး နွုတ်ခမ်းလေး စူလိုက်မိသည်။ ရေချိုး ထမင်းစားပြီးမာလာခိုင် ကားကိုယူ၍ သူမအိမ်သို့ ပြန်သွားချေပြီ။ ဦးကျြောစိနျက အိမျရှေ့တိုကျပနျးခွံအောကျတှငျရှိသော ခုံတနျးလြားပျေါ၌ အိပျနသေညျ။ အိပ်ယာပေါ် လှဲ၍ မဂ္ဂဇင်း ဖတ်နေသော နွယ်နီ တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းထံ ဖုန်းဆက်ရန်း သတိရသဖြင့် စာအုပ်ကိုပိတ်၍ထထိုင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ အိမ်ဘေးပန်းခြုံဘေးမှ လွုပ်ခနဲ တွေ့၍လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ စောစောက ငါအိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲပြီး စာဖတ်နေတုန်း ပေါင်ကိုထောင်ပြီး ချိတ်ထားသော့စကပ်က ခါးပေါ်လန်ကျပြီး အောက်ပိုင်းမှာဘာမှ မရှိဘူး၊ သူငါ့ကိုလာချောင်းကြည့်ပြီး ငါ့ဟာလေးကို တွေ့ပြီး ဒီလိုဖြစ်နေတာများလား။
အို.အို..နွယ်နီသိမ့်သိမ့်တုန်သွားရပြန်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးထဲမှလည်း ဘာတွေမှန်းမသိ ညှစ်ထုတ်လိုက်မိသလို။ နွယ်နီမနေနိုင်တော့။ စကပျလေးအောကျသို့လကျလြှိုလိုကျပွီး စောကျဖုတျကလေးကို ကိုငျစမျးလိုကျမိသညျ။ သူမကအိမ်မှာနေရင်းမို့ ဘာအောက်ခံကိုမှမဝတ်တတ်။ ဟင်… သူမစောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံး အံ့သြလောက်အောင်ခုံးထမာကျောနေပြီး အရည်တွေကလည်း အတော်များများပင်စိုရွဲနေအောင်ထွက်ကျနေသည်။ အရည်တွေကလည်း လက်နဲ့ထိမိလိုက်တော့ ချွဲကျိစေးထန်း နေသည်။
“အို.အိုး.အမေ့အိုးကောင်းလှချည်လား… အရသာရှိလိုက်တာပါလား..” စိတ်ထဲနဲနဲကျေနပ်သွားသည်။ “ဟင်ကျွတ်..”ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေသော ဟိုလူကြီး ထိုင်နေရာမှ အထ သူမနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မိပြီး လူကြီးက ပြုံးပြ၍လှည့်ထွက်သွားသည်။ ငါ့နှယ် နော်သေသာ သေလိုက်ချင်တာပဲ။ တစ်ကိုယ်လုံး ထူပူသွားသော နွယ်နီ တစ်ယောက် အိပ်ယာပေါ်သို့ ဝုန်းခနဲပစ်လှဲချလိုက်မိလေတော့သည်။
“ဟာ.ကိုခင်အေးပြန်တော့မလို့လား” “ဟုတ်တယ် ကိုကျော်စိန် ဒီနေ့ခင်ဗျားက ငွေထုတ်ပေးထားတော့ ခင်ဗျားကိုပြုစုရအုံးမယ်” “ဟာရပါတယ်.ဗျာ..” “ကဲမင်းပြန်တော့…”ကိုခင်အေးက သူ့တပည့်ကောင်လေးကို လှည့်၍ ပြောလိုက်သည်။ “ဟုတ်ကဲ့..ဆရာ..” “လာဗျာ ကိုကျော်စိန်ဆိုင်က လမ်းထောင့်တင် ရှိတာပဲ လိုက်ခဲ့ဗျာ” “အဲ.ခဏလေး.နော်” ကိုကျော်စိန်က အိမ်ထဲဝင်၍ ဧည့်ခန်းထဲ၌ ရပ်လိုက်သည်။ “နွယ်နီရေ.ဦးလေးအပြင်ခဏသွားလိုက်အုံးမယ်” “ဟုတ်..” နွယ်နီ၏တုံ့ပြန်သံအဆုံး ကိုကျော်စိန်သည် ခင်အေးနှင့် အတူ လမ်းထိပ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။
မှောကျလကျြ အိပ်နေလို့လဲ ခံစားချက် ဝေဒနာက မပျောက်။ ပက်လက်လှန် အိပ်တော့လည်း ဝေဒနာကမထူခြား။ နွယ်နီ စိတ်ညစ်မိသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး နေမထိ ထိုင်မသာဖြင့် စိတ်ထဲတွင် တစ်ခုခု လိုနေသလိုပင် ဖြစ်နေရသည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုရ၍ နွယ်နီ လှဲနေရာမှ ထ၍ သူမ၏ အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး ဒက်ဒီတို့ အိပ်ခန်းကို ဖွင့်၍ဝင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဒက်ဒီ စားပွဲအံဆွဲများတွင် ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရင်း စီဒီခွေတစ်ချပ်ကိုဆွဲယူ၍ စက်တွင်ထည့်ကာ ကြည့်လိုက်သည်။
အခွေက အပြာကားဒီအခွေ ရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ကဒက်ဒီတို့အခန်း ရှင်းပေးရင်း တွေ့လို့ စမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ကောင်းလိုက်သည့် ဇာတ်ကား၊ ဇာတ်လမ်းလည်း ဆုံးရော နွယ်နီ စောက်ဖုတ်လေးလဲ ရွဲနစ်လို့နေသည်။ ပြီးတော့ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာကလည်း မသက်သာသည့်အပြင် မီးလောင်ရာ လေပင့် ပိုလို့တောင်ဆိုးလာသည်။ နွယ်နီ အခွေကို သူ့ နေရာသူ ပြန်ထားရင်း စားပွဲပေါ်တွင် ဝီစကီပုလင်းရေသန့်ဗူးနှင့် ဖန်ခွက်တို့အဆင်သင့်တွေ့လိုက်သည်။
မူးမူးနှင့်အိပ်ပျော်သွားရင်ကောင်းမည်ဟုတွေးမိကာ ဝီစကီနှစ်ပက်နီးနီးလောက်ထည့်၍ ရေနှင့် ရောပြီး သောက်ပစ်လိုက်သည်။ အရင်က တစ်ခါနှစ်ခါလောက် မြည်းစမ်းသောက်ကြည့်ဖူးသည်။ ခုလောက်တော့ မများပေ။
နွယ်နီ အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ရောက်တော့ အူရိုင်းလေး ဖြစ်၍ အရက်ရှိန် အတော်တက်လာသည်။ သူမကိုယ်ပေါ်ရှိ အဝတ်အစား အားလုံးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူမ၏ ဗလာကငျြးနသော ကိုယျလုံးကိုမှနျရှေ့တှငျ လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို ကွ၍ ကားပြီး ငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်။ အို… သူမ စောက်ဖုတ်လေးမှ အရည်လေးတွေ အောက်သို့အမျှင်လေးတွေတန်းကာ တွဲလောင်းလေး ထွက်ကျလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်သူမ ဆူဝေနေသော သွေးသားဆန္ဒကိုဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ပါ။
စောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးနှဈခုကို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ဖိ၍ ဟလိုက်သည်။ နီရဲနေသော စောကျခေါငျးဝလေးတှငျ မနျကညျြးစေ့လောကျရှိသော စောက်စေ့ကလေးက ထိုးထိုးထောင်ထောင်လေး ဖြစ်နေသည်ကို မှန်ထဲတွင်အတိုင်းသား တွေ့မြင်လိုက်ရသည်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ စိတ်မှန်းဖြင့် လီးကိုမြင်ယောင်ကာစောက်ပတ်ဝလေးကို လက်ချောင်းထိပ်လေးများဖြင့် လှည့်ပွတ်ပေးနေမိသည်။
“အို…” အရသာရှိလှပေမယ့် အားမရချင်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ နှယျနီမှနျရှေ့မှ လှညျ့ထှကျခဲ့ပွီး ကုတငျစောငျးတှငျထိုငျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ပကျလကျလှနျခကြာပေါငျကား၍ စောကျပတျဖောငျးဖောငျးလေးကို ပှတျ၍ကလိမိသညျ။ နှယျနီသညျ နဂိုကထကွှနသော ရမ်မကျစိတျကို လက်ဖြင့် ဖြေဖျောက်ရင်း အပြာကားကို ကြည့်ခဲ့ပြီး အရက်ကိုပါ သောက်လိုက်မိလေတော့ သူမ၏ရာဂစိတ်တွေက အဆမတန်ပင် ထကြွလာရုံမက အရှကျတရားပငျ မရှိတော့သလောက်နီးနီးဖြစ်လို့နေပါပြီ။
“ဟင်းဟင်း..အင့်.အင်း…” ပွတ်ရင်းစောက်စေ့ကလေးကိုထိမိတော့ ကျင်ဆိမ့်တက်သွားသည်။ ဒီတော့စောက်စေ့ကိုဖိ၍ပွတ်သည်။ စောက်ခေါင်းထဲကိုတစုံတခု ထိုးထည့်ချင်သော စိတ်တွေကလည်း ပြင်းပြထက်သန်လို့လာရသည်။ မှိတ်ထားသော မျက်လုံးထဲတွင်တော့ သူမတွေ့ခဲ့သည့် လီးကြီးကို အာရုံ မပြတ်ပေ။
“အင်း..ဟင်း..ဟင်း..ရှီးအ.ကြှီ..” အိပ်ခန်းတံခါး ပွင့်သွားသံ ကြားသဖြင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲကို လှမ်းဝင်လာသောကိုကျော်စိန်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တစ်နေ့လုံး မငြိမ်းနိုင်တဲ့မီး အရက်ပါ ထပ်သောက်လာလိုက်တော့ ကိုကျော်စိန်တစ်ယောက် ရဲဝံ့၍ နေပါပြီ။ အိပ်ခန်းထဲမှ ငြီးသံ သဲ့သဲ့ ကြားရ၍တံခါးကိုဟကြည့်လိုက်ရာနွယ်နီတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရတော့ကိုကျော်စိန်ချက်ချင်းပင်အခန်းထဲသို့လှစ်ခနဲဝင်လာခဲ့လိုက်တော့သည်။
“ဟင်…” ဦးလေးနွယ်နီ မျက်လုံးလေးတွေ ဝိုင်းသွားရစဉ်ကိုကျော်စိန်က အခန်းထဲ အရောက် မတ်တတ်ရပ်၍ ပုဆိုးကိုချွတ်ချပစ်လိုက်သည်။ အိုကိုကျြောစိနျရှေ့သို့ လှမျးလိုကျရငျး သူ့အကငြ်ီကိုပါ ဆှဲခြှတျလိုကျသညျ။ ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားပေပြီ။ နွယ်နီလူးလဲထလိုက်ပြီး သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်စောင်းတွင် ဒူးထောက်၍ထိုင်လိုက်သည်။ ရှေ့သို့လှမျးလာသော ကိုကျြောစိနျ သူမနှငျ့လကျတဈကမျးအကှာသို့ ရောကျလာသညျ။
“နေနေအုံး..ဦးလေး..” ကိုကျော်စိန်ရပ်လိုက်သည်။ နွယ်နီက အိပ်ယာပေါ်တွင်ပင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကနောက်သို့ပြန်၍ ထောက်ကာ လီကို ကြည့်ရင်း စောက်ပတ်ထဲ လက်ခလယ် ထိုးထည့်ကာကလိသည်။ နွယ်နီ၏ လက်ခလယ်က စောက်ပတ်ထဲသို့ ပို၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြင့် အသွင်းအထုတ်လုပ်လာသည်။
“အင်းဟင်း.အင့်.အင်း” အနီးကပ် တွေ့နေရသော ကိုကျော်စိန် မနေနိုင်တော့။ “နွယ်နီလေး..သမီး စောက်ပတ်လေးထဲ ဦးလေိးုလိုးထည့်လိုက်ရင် ဒီထက်ပိုကောင်းမှာ ..သမီးရဲ့..” “ထည့်.ထည့်လေ.လာ..လာ..” နွယ်နီက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်းဆွဲခေါ်သည်။ ရှေ့သို့ တိုးကပ်လာပြီး ကိုကျော်စိန်က ကုတင်ပေါ်မှနွယ်နီကို ကုတင်စောင်းတွင် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲစေပြီး သူမ၏ ခြေနှစ်ချောင်းကို သူ့ပုခုံးတဖက်စီတွင်တင်ကာ လီးကို စိုရွဲနေသော စောက်ပတ်အဝတွင် တေ့ကပ်လိုက်သည်။
“သွင်းသွင်းတော့လေ” “ဗြစ်.ဗြစ်ဖွတ်” “အားအီးအားအမေ့.အီး…” စိတ်မထိန်းနိုင်တော့သော ကိုကျော်စိန်ကအဆုံးဝင်အောင် တစ်ချက်တည်းဆောင့်၍ သွင်းချလိုက်သည်။ နွယ်နီတစ်ယောက် ကော့တက်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာသည်။ ကိုကျော်စိန်ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ မဆန့်မပြဲဖြင့် စောက်ပတ်လေးအဝမှ သွေးစီးကြောင်းလေးတွေ့လိုက်ရသည်။ လက်လှမ်း၍ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေပေးလိုက်သည်။
“လုပ်..လုပ်လေဦးလေးရ..အ..အမလေး..လေး” “နွယ်နီလေး…” “အင်း..အင်း…” “ကောင်းလား..” သွေးထွက်နေမှန်းသိ၍ နာကျင်မွုသက်သာအောင် အဆောင့်ရပ်ပြီး နို့တွေကိုကလိပေးနေရာမှမေးလိုက်သည်။ “အင်းဟင်း..လုပ်.လုပ်..နာနာလေးကောင်းကောင်းတယ်… ဆောင့်ပေးပါ.အားအင့်.. အမေ့.တအားဆောင့်ပေးပါ.. အအား… ဆောင့်စမ်းပါ ဦးလေးရဲ့ .. ဘာလဲ..အားမရှိဘူးလား… ကျွတ်ကျွတ်… အင့်..ဟင့်…”
ကိုကျော်စိန် သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဖိညှစ်ဆွဲကိုင်ပြီး အသားကုန် ဆောင့်လိုးပါတော့သည်။ “ဗြစ်..ဘွတ်ပလွတ်.ဖွတ်..ဗြစ်” “အား.အင်းအင့်အ..အမေ့အား.အိ..အ…” နွယ်နီခါးလေးကော့တက်ကာ ခေါင်လေးဘယ်ညာရမ်းခါရင်း တစ်ချီ ပြီးသွားသည်။ မပြီးသေးသော ကိုကျော်စိန်က အရှိန်ကို လြှော့၍ တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပေးသည်။ နွယ်နီအာသာပြေသေးပုံမရ။ စောက်ပတ်ထဲမှ တလွုပ်လွုပ်တရွရွဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်ပေးနေသလို တစ်ချက်ချင်းဆောင့်ပေးနေရာမှ ခဏအကြာနောက်တစ်ချီအတွက် အပြီးလိုးရန် အိုင်ထွန်းရွဲနစ်နေပြီးချော်ချွတ်ချွတ် ဖြစ်နေသော အရည်များကို သုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ကိုကျော်စိန် ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
“အိုး.မထုတ်..မထုတ်နဲ့လေ လုပ်လုပ်လုပ်လေ ဦးလေးကလဲ ကျွတ်..ပြောလိုက်ရတာနော်..ဟင့်ဟင့်..” “လိုးပါ့မယ်..နွယ်နီရဲ့တော်ကြာ နွယ်နီလေးကသာ နာတယ် တော်ပြီ မပြောနဲ့” “အံမာ.ဦးလေးကလား နွယ်နီခံနိုင်အောင်ခံမယ်…”
“စိန်လိုက်..လေ ” ဦးလေးတစ်ညလုံးလိုးပေးမလား..ဦးလေး အားကုန်သာလုပ် ကွဲချင်ကွဲသွားပလေ့စေ.. ဦးလေးဟာကြီးသာ မထုတ်ပစ်နဲ့… နွယ်နီအောင့်ပြီး ခံနိုင်အောင်ခံမယ်” နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်ကြကာနွယ်နီက မျက်လုံးလေးနှစ်လုံးကို မှိတ်ချလိုက်ပါလေတော့သတည်း။ ။ ပီး